ကလေးတွေဟာ စားစရာမဟုတ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ပါးစပ်ထဲထည့်တဲ့ အကျင့်ရှိတက်ပြီး တစ်ခါတစ်ရံ မျိုချတဲ့အထိပါ ပြုလုပ် တက်ကြပါတယ်။ သတ္တုနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ အရုပ်တွေ၊ ဈေးပေါတဲ့ ရတနာပစ္စည်းအတုတွေမှာ ခဲ၊ ကက်ဒမီယမ်ဒြပ်စင်(Cadmium) တွေလို မျိုး အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေတဲ့ အရာတွေ ပါဝင်လေ့ရှိပါတယ်။ဒီလိုအရာတွေက ကလေးငယ်ရဲ့ကျန်းမာရေးကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်ပါ သလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းပေါ်လာပြီး ပညာရှင်တွေ အဖြေရှာခဲ့ကြပါတယ်။လေ့လာမှုတွေအရ ဈေးကွက်ထဲမှာသုံးစွဲသူအာမခံချက်မရှိဘဲ ဈေး ပေါပေါနဲ့ ၀ယ်ယူရရှိနိုင်တဲ့ သတ္တုအရုပ်တွေနဲ့ လက်ဝတ်ရတနာ ပစ္စည်းအတုတွေဟာ ကလေးငယ်တွေရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင် တယ်ဆိုတဲ့ အဖြေရရှိခဲ့ပါတယ်လို့ ScienceDaily သုတေသနဂျာနယ်မှာ ဖော်ပြလာပါတယ်။
အထက်ပါ သတ္တုနှစ်မျိုးလုံးဟာ ဓာတ်သတ္တိကြပြီး အဆိပ်သင့်စေနိုင်ပါတယ်။ ဈေးကွက်အတွင်းက အချို့သောအရုပ်တွေမှာ ကြေးနီ၊နီကယ်၊ အာဆင်းနစ်နဲ့ ခနောက်စိမ်းတွေပါ ပါဝင်နေတာကို တွေ့ရှိခဲ့ရပြီး ဒါက ကြီးမားတဲ့ပြဿနာ ဖြစ်လာပါတယ်လို့ သုတေသန ပြုမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ ပညာရှင်တစ်ဦးက ဆိုခဲ့ပါတယ်။ စမ်းသပ်မှုတွေအရ ဒီသတ္တုတွေဟာ အစာချေလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက် လှုပ်ရှားနိုင်ပြီး အချို့အစိတ်အပိုင်းတွေကို အဆိပ်သင့်စေတာကို တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
သုတေသီတွေက ခဲ၊ နီကယ်သတ္တုတွေကို ကလေးတွေ ထိတွေ့ကိုင်တွယ်တဲ့အခါမှာ အန္တရာယ်မရှိဘဲ ထိတွေ့ကိုင်တွယ်လို့ရ မယ့် စံသတ်မှတ်ထားလို့ရမယ့် ပါဝင်မှုအဆင့်ကိုလည်း ရှာဖွေနေခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ခဲနဲ့နီကယ်သတ္တု ဓာတ်သတ္တိကြွမှု အနည်းအများပေါ် မူတည်ပြီး ကလေးငယ်တွေမှာ ဗိုက်နာခြင်း၊ မူးဝေအော့အန်ခြင်း၊ ၀မ်းပျက်ဝမ်းလျှောဖြစ်ခြင်းနဲ့ နာတာရှည်ရောဂါ အမျိုးမျိုး ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တာကို အချက်အလက်တွေကတစ်ဆင့် တွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ခဲနဲ့နီကယ် ဆိပ်သင့်မှုကြောင့် ခံစားရတဲ့ နာတာရှည်ရောဂါက ကလေးငယ်တွေမှာ ပြန်မကောင်းနိုင်တော့တဲ့ မှတ်ဉာဏ်ချို့ယွင်းမှုတွေကိုပါ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်လို့ သုတေသီ တွေက သတိပေးပြောကြားထားပါတယ်။
ယခုအခါမြန်မာနိုင်ငံတွင်းသို့ ပြည်ပမှ နည်းလမ်းမျိုးစုံဖြင့်မှတ်ပုံတင်
ခွင့် ပြုထားခြင်းမရှိသော အဆိပ်ရှိပစ္စည်းများနှင့်ထုတ်လုပ်ထားသည့်
ကျင်းထုံခြင်ဆေးခွေများ ဝင်ရောက်လျက်ရှိပါသည်။
ယင်းခြင်ဆေးခွေများ ကိုပြည်သူများသုံးစွဲခြင်းမပြုကြရန် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာနမှ နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာများတွင် အသိပေး ထုတ်ပြန်ကြေညာ
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျင်းထုံခြင်ဆေးခွေအမည်ဖြင့်မည်သည့် ခြင်ဆေး
ခွေကိုမျှ ပိုးသတ်ဆေးဥပဒေနှင့် အညီ မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိဘဲ ဈေးကွက်
တွင် တွေ့ ရှိရသော ကျင်းထုံတံဆိပ်ခြင်ဆေးခွေနမူနာများကိုစစ်ဆေးခဲ့ရာတွင် ကျင်းထုံတံဆိပ်ဖြင့်ခြင်ဆေးခွေများပေါ်တွင် ဖော်ပြထားသော
အမျိုးအစား ဓာတုပစ္စည်း၏ ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း ဝ ဒသမ ဝ၈ ရာခိုင်နှုန်း သည် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးမှ ထုတ်ပြန်ထားသော အများဆုံးပါဝင်ရ မည့်ပမာဏ ဝ ဒသမ ဝ၄ ရာခိုင်နှုန်းထက်ပိုမိုပါဝင်နေသဖြင့်သုံးစွဲသူများ
၏ကျန်းမာရေးကိုများစွာထိခိုက်စေပါသည်။
တရားမဝင် တင်သွင်းလာသော အခြားခြင်ဆေးခွေများကိုလည်း
လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ၊ ပိုးသတ်ဆေးဓာတ်ခွဲခန်းတွင် စစ်ဆေးလျက်
ခြင်ဆေးခွေတင်သွင်းရောင်းချသူများအနေဖြင့် တင်သွင်း လာသော ခြင်ဆေးခွေတွင် အဆိပ်ရှိပစ္စည်းပါဝင်မှု စစ်ဆေးခြင်းနှင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲသို့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်
နိုင်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ တရုတ်ပြည်မှ တင်သွင်းလာသော ကျန်းမာရေးကို
ထိခိုက်စေနိုင်သည့်ယင်းကျင်းထုံခြင်ဆေးခွေများကို သုံးစွဲခြင်းမပြု
ကြရန်နှင့်တင်သွင်း၊ ရောင်းချ၊ ဖြန့် ဖြူးမှုများကိုတွေ့ ရှိပါက ပြည်သူ့ ဘဏ္ဍာ
အဖြစ် သိမ်းဆည်းမည်ဖြစ်ပြီး ပိုးသတ်ဆေးဥပဒေအရ အရေးယူ
ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ထပ်မံအသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
ပိုးသတ် ဆေးမှ တ် ပုံတင် အဖွဲ့  လယ် ယာစိုက် ပျိုးရေးနှ င့်ဆည် မြောင်းဝန် ကြီးဌာန
ကနဦးရောင်းမည့် အူရီဒူး ဆင်းကတ်များ ပြည်ပသို့ ဖုန်းခေါ်နိုင်မည့်စနစ် ပါဝင်မည်
မိုဘိုင်းဖုန်းဆင်းကတ်များ ရောင်းချချိန်တွင် ပြည်ပသို့ ဖုန်းခေါ်ဆို နိုင်သည့် စနစ်ပါဝင်မည်ဖြစ်ပြီး ယင်းအတွက် နိုင်ငံတကာနှင့် ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်နေပြီဟု Ooredoo မြန်မာဆက်သွယ်ရေး ကုမ္ပဏီမှ သိရသည်။
”ဘယ်နိုင်ငံတွေကို ခေါ်လို့ရမယ်။ ခေါ်ဆိုခဘယ်လောက်ကျမယ်ဆိုတာတွေကို ဆွေးနွေးနေပါတယ်။ အားလုံးပြီးစီးသွားတာနဲ့ ထုတ်ပြန်ကြေညာပေး သွားမှာပါ”ဟု Ooredoo မြန်မာမှ သတင်းပြန်ကြားရေးမန်နေဂျာ မသီရိကြာညိုက ပြောသည်။ ဖုန်းများရောင်းချရာတွင် ဆင်းကတ်အရေအတွက်ကို အကန့်အသတ် မရှိရောင်း ချပေး သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း Data အချက်အလက်များသုံးစွဲနိုင်မည့် အင်တာနက်စနစ်ပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့် အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုများ ရရှိ မည်ဖြစ်ကြောင်း ယင်းကုမ္ပဏီမှ သိရသည်။
” Roaming ကိစ္စတွေအပြင် အခြားဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာတွေနဲ့ ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှုတွေပါ လုပ်နေပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့လထဲမှာတော့ အော်ပရေတာ တစ်ခုနဲ့ကွန် ရက်ချိတ်ဆက်မှု ပြီးစီးသွားပါပြီ”ဟု ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော မိုဘိုင်းအင်တာနက်အသုံးပြုနိုင်ခွင့်တွင် 3G ကွန်ရက်၌ အကောင်း ဆုံးအ သုံးပြုနိုင်သည့် Samsung နှင့် အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းအတွက် သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီနှင့် နားလည်မှုသဝဏ်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုး ထား ပြီဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
Ooredoo မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး ကုမ္ပဏီသည် မိုဘိုင်းဖုန်းဆင်းကတ်များကို ကျပ် ၁၅ဝဝ နှုန်းဖြင့် ယခုနှစ် သြဂုတ်နှင့် စက်တင်ဘာလတွင် ရောင်း ချပေးမည်ဟု သတင်း ထုတ်ပြန်ထားပြီး တစ်မိနစ်ဖုန်းခေါ်ဆိုခ ၂၅ ကျပ်နှုန်း အနည်းဆုံးကောက်ခံမည်ဟု ယင်းကုမ္ပဏီမှ သိရသည်။လက်ရှိတွင် ဖုန်းများရောင်းချနိုင်ရေးအတွက် တာဝါ တိုင် စိုက်ထူခြင်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နေသော်လည်း ၎င်းဖုန်းများအား မသုံးစွဲရေးအတွက် ဆန္ဒပြလှုံ့ဆော်မှုများ ဖြစ်ပေါ်နေပြီး ဝန်ထမ်းအချို့ပါ ခြိမ်းခြောက်ခံရမှု များရှိေ နကြောင်း ယင်းကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးထံမှ သိရသည်။
ကာတာအခြေစိုက် ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီ Ooredoo သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၁၅ နှစ်ကြာရင်းနှီးမြှုပ်နှံခွင့်ရရှိထားပြီး ၅ နှစ်အတွင်း မြန်မာလူမျိုး ၉၉ ရာခိုင် နှုန်းအ ထိခန့် အပ်မည်ဟု ပြောဆိုထားသည်။ လတ်တလော ဆန္ဒပြမှုများကို ဝန်ဆောင်မှုကောင်းကောင်းပေးခြင်းဖြင့်သာ ဖြေရှင်းမည်ဟု ယင်းကုမ္ပဏီမှ သိရသည်။
ချစ်သူကို သေနတ်ဖြင့် ပစ်သတ်ချိန်တွင် ပစ္စတိုးရီးရက်စ်၏ စိတ်အခြေအနေ ဖောက်ပြန်မှုမရှိခဲ့
ပစ္စတိုးရီးရက်စ်ကို ၄င်း၏ချစ်သူနှင့်အတူ တွေ့ရစဉ်
ချစ်သူကို သတ်ဖြတ်မှုဖြင့် တရားရင်ဆိုင်နေရသည့် တောင်အာဖရိက နာမည်ကျော် မသန်စွမ်း အပြေးသမား အော်စကာ ပစ္စတိုးရီးရက်စ်၏ အမှုကို ရုံးချိန်းယူ ဆက်လက်စစ်ဆေးရာ ၎င်းအနေဖြင့် အမျိုးသမီးကို သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်ချိန်တွင် စိတ်ကစဉ့်ကလျား အခြေအနေမျိုး လုံးဝမရှိကြောင်း စိတ်ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာတစ်ရပ် တရားရုံးသို့ တင်သွင်းခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
ရီဗာစတင်းကမ့်ကို သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်ခဲ့ချိန်တွင် ပစ္စတိုးရီးရက်စ်သည် စိတ်ပူပင် ဖိစီးမှုများ ရှိနေကြောင်း တရားခံ ရှေ့နေများဘက်မှ ခုခံ လျှောက်လှဲခဲ့သော်လည်း ယခုအစီရင်ခံစာက ၎င်း၏ စိတ်အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်ပြီး မူမမှန်မှု မရှိကြောင်း ဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်သည်။
(၂၀၁၃)ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၄)ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းက ပစ္စတိုးရီးရက်စ်သည် ပရီတိုးရီးယားမြို့ရှိ ၎င်း၏ နေအိမ်တွင် တောင်အာဖရိကမော်ဒယ်လ် စတင်းကမ့်ကို ပစ်သတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ပစ္စတိုးရီးရက်စ်က ၎င်းသည် စတင်းကမ့်ကို သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်း ဝန်ခံထားသော်လည်း ထိုစဉ်က ရေချိုးခန်းထဲတွင် ရှိနေသော အမျိုးသမီးကို ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသည့် မသမာသူ တစ်ဦးဟု အထင်မှားကာ စိတ်ပူကာ ပစ်မိခဲ့ခြင်းဟု တရားရုံးတွင် လျှောက်လှဲထားသည်။
သို့သော်လည်း သေနတ်ဖြင့် အချက်အတော်များများ ပစ်ခတ်ခဲ့ချိန်တွင် အမျိုးသမီး၏ အော်သံကို အဘယ်ကြောင့် သတိမမူမိကြောင်း တရားလို ရှေ့နေများက ပြန်လည်ထောက်ပြ မေးခွန်းထုတ်ခဲ့သည်။ ယခုတင်သွင်းသည့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လေ့လာမှု အစီရင်ခံစာကို တရားလိုဘက်ကရော၊ တရားခံဘက်ကပါ လက်ခံခဲ့ကြောင်းလည်း သိရသည်။
အစီရင်ခံစာတွင် အသက်(၂၇)နှစ်ရှိ ပစ္စတိုးရီးရက်စ် အနေဖြင့် ရာဇဝတ်မှု တစ်ခုကို စိတ်လိုက်မာန်ပါ ပြုမူရလောက်သည်အထိ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖောက်ပြန်မှု၊ မှားယွင်းအားနည်းမှု မရှိကြောင်း ကောက်ချက်ချ ဖော်ပြထားသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း တရားခံ အကျိုးဆောင် အဖွဲ့သည် ပစ္စတိုးရီးရက်စ် ငယ်စဉ်က ၎င်း၏ ခြေထောက်များကို ဖြတ်တောက် ကုသပေးခဲ့ရသည့် ဒေါက်တာ ဂယ်ရီ ဗားစ်ဖဲလ်၏ ထွက်ဆိုချက်ကို မျှော်လင့်အားကိုးရတော့မည် ဖြစ်သည်။
ပစ္စတိုးရီးရက်စ်သည် မွေးရာပါ ခြေသလုံးရိုးများ ပါမလာသဖြင့် အသက်(၁၁)လသား အရွယ်ကတည်းက ခြေထောက်များကို ခွဲစိတ်ဖြတ်တောက်မှု ခံယူခဲ့ရသည်။ ဒေါက်တာ ဗားစ်ဖဲလ်သည် မသန်စွမ်းသူ ဘဝက ပစ္စတိုးရီးရက်စ်အပေါ် မည်ကဲ့သို့ သက်ရောက်မှု ရှိနိုင်ကြောင်း သက်သေခံ ထွက်ဆိုရမည် ဖြစ်သည်။
အသက်(၂၉)နှစ်ရှိ စတင်းကမ့်သည် ဥပဒေ ဘွဲ့ရတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ပစ္စတိုးရီးရက်စ်နှင့် (၃)လကြာမျှ တွဲနေပြီးနောက် ယခုကဲ့သို့ သေနတ်ဖြင့် ပစ်သတ်ခံရခြင်း ဖြစ်သည်။ သူမသည် ရေချိုးခန်းထဲတွင် ရှိနေစဉ် တံခါးအပြင်ဘက်မှနေ၍ သေနတ်ဖြင့် ဖောက်ထွင်းပစ်ခတ် ခံခဲ့ရသည်။
ပစ္စတိုးရီးရက်စ်သည် စိတ်ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ စစ်ဆေးမှုများကို ခံယူရန်အတွက် ပရီတိုးရီးယားမြို့ရှိ Weskoppies စိတ်ကျန်းမာရေး ဆေးရုံတွင် အပြင်လူနာအဖြစ် တစ်လကြာ အစစ်ခံခဲ့ရသည်။ တောင်အာဖရိက တရားစီရင်ရေးတွင် ဂျူရီလူကြီးများ ပါဝင်ဆုံးဖြတ်မှု မရှိသောကြောင့် ပစ္စတိုးရီးရက်စ်၏ ကံကြမ္မာသည် တရားသူကြီးနှင့် လက်ထောက်နှစ်ဦး၏ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှု ရလဒ်အပေါ်တွင်သာ အဓိက တည်မှီနေသည်။
အကယ်၍ ပြစ်မှုထင်ရှားပါက ပစ္စတိုးရီးရက်စ် အနေဖြင့် အမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ် ထောင်ဒဏ်တစ်သက်ထိ ချမှတ်ခံရဖွယ် ရှိနေကြောင်းလည်း သိရသည်။ ထိုသို့မဟုတ်ဘဲ လူသတ်မှု စွဲချက်မှ လွတ်မြောက်သွားသည့်တိုင် တရားရုံးက လူသတ်မှု ဖြစ်စေလောက်သည့် ပါဝင်ပတ်သက်မှုဖြင့် ပြောင်းလဲစွဲချက်တင်မည့် အလားအလာ ရှိနေပြီး ယင်းအတွက် အမြင့်ဆုံး ပြစ်ဒဏ်မှာ ထောင်ဒဏ်(၁၅)နှစ်ဖြစ်သည်။
ပစ္စတိုးရီးရက်စ်သည် သတ္တုခြေတုနှစ်ခုကို ခြေထောက်အောက်ပိုင်းတွင် တပ်ဆင်ပြေးလွှာပြီး မသန်စွမ်း အပြေးပြိုင်ပွဲများတွင် ရွှေတံဆိပ်ဆုများ ရရှိခဲ့သည့် တောင်အာဖရိက ဂုဏ်ဆောင် အားကစားသမား တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အိုလံပစ် ပြိုင်ပွဲ သမိုင်းတစ်လျှောက်တွင် သန်စွမ်းကျန်းမာသည့် အပြေးသမားများနှင့် တန်းတူယှဉ်ပြိုင်သည့် ပထမဆုံး ခြေနှစ်ဖက်စလုံး ကင်းမဲ့သော မသန်စွမ်း အပြေးသမား အဖြစ်လည်း (၂၀၁၂)ခုနှစ်၊ နွေရာသီ အိုလံပစ်တွင် သမိုင်းမှတ်တမ်းတစ်ခု ရေးထိုးထားနိုင်ခဲ့သည်။
ဘရာဇီးအသင်း ပင်နယ်တီ အဆုံးအဖြတ် ခံယူသည်ကို စောင့်ကြည့်ရင်း ပရိသတ်တစ်ဦး နှလုံးထိခိုက်သေဆုံး
ချီလီနှင့်ပွဲစဉ်တွင် ဘရာဇီးကစားသမား နေမာမှ ပင်နယ်တီဂိုး သွင်းယူနေစဉ်
ကမ္ဘာ့ဖလား ဘောလုံးပြိုင်ပွဲတွင် လက်ရွေးစင်အသင်း၏ ပင်နယ်တီ အဆုံးအဖြတ် ခံယူမှုကို စောင့်ကြည့်ရင်း ဘရာဇီး ပရိသတ်တစ်ဦး နှလုံးဖောက်ပြန် သေဆုံးသွားကြောင်း သိရှိရသည်။
ဇွန်လ(၂၈)ရက်နေ့ ညပိုင်းက ကမ္ဘာ့ဖလားအိမ်ရှင် ဘရာဇီး အသင်းသည် ချီလီနှင့် (၁၆)သင်း ရှုံးထွက်အဆင့် ယှဉ်ပြိုင်ကစားရာ အချိန်ပို ပြီးဆုံးသည်အထိ တစ်ဂိုးစီ သရေသာ ဖြစ်နေခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်လည်း တောင်အမေရိက နှစ်သင်းအနေဖြင့် နောက်တစ်ဆင့် တက်ရေးအတွက် ပင်နယ်တီ အဆုံးအဖြတ်ကို ခံယူခဲ့ရသည်။
ဘီလိုဟိုရီဇွန်တေးရှိ ပရိသတ် (၆၂၀၀၀) ဝင်ဆံ့သော မီနိုင်ရာအို ကွင်းကြီးမှ ဘားခန်းတစ်ခုတွင် အဆိုပါပွဲကို TVမှတစ်ဆင့် တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနေသည့် အသက်(၆၉)နှစ်အရွယ် ပရိသတ်မှာ စိတ်လှုပ်ရှားမှု လွန်ကဲလာပြီး နှလုံးထိခိုက်ကာ သေဆုံးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ၎င်းကို ဆေးရုံသို့ အရေးပေါ် ပို့ဆောင်ခဲ့သော်လည်း မကြာမီတွင်ပင် အသက်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့သည်။
Estado de Minas သတင်းစာက ချီလီနှင့် ပင်နယ်တီ အဆုံးအဖြတ် ခံယူနေချိန်တွင် စိတ်လှုပ်ရှားလွန်းသဖြင့် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ခံယူရသူ ဘရာဇီးပရိသတ် (၉၈)ဦးထိ ရှိခဲ့ပြီး ယခုပုဂ္ဂိုလ်ကမူ ကံဆိုးစွာဖြင့် အသက်ပါ ဆုံးပါးခဲ့ခြင်းဟု ဖော်ပြခဲ့သည်။
ဘရာဇီး အသင်းသည် အဆိုပါ ပင်နယ်တီ အဆုံးအဖြတ်တွင် ချီလီကို အနိုင်ရရှိပြီး ကွာတားဖိုင်နယ် အဆင့်သို့ တက်ရောက်ကာ နောက်ထပ် တောင်အမေရိက ပြိုင်ဘက်တစ်သင်းဖြစ်သည့် ကိုလံဘီယာနှင့် ရင်ဆိုင်ရတော့မည် ဖြစ်သည်။
ဖုန်း application မှ လိင်ဆက်ဆံဖက် ရှာဖွေသူများအကြား ရောဂါကူးစက်မှုများလာ
အမျိုးသားအချင်းချင်း လိင်ဆက်ဆံမှု ပြုလုပ်သူများအနက် မိမိတို့ လိင်ဆက်ဆံဖက်ကို ဖုန်း application များမှတစ်ဆင့် ရှာဖွေသူများသည် လူချင်းတွေ့ဆုံ၍ဖြစ်စေ၊ လူမှုကွန်ယက်များမှဖြစ်စေ ရှာဖွေသူများထက် လိင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်ရောဂါများ ပိုမိုကူးစက်ခံနေရကြောင်း သုတေသနတစ်ခုအရ သိရသည်။
အင်တာနက်အသုံးပြုမှုနှင့် လူမှုကွန်ယက်များ ကြီးထွားလာမှုကြောင့် လူတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ဆက်သွယ်ရန် လွယ်ကူလာပြီး ဆက်သွယ်စရာ သီးသန့် ဖုန်း application များ ထွက်ပေါ်လာသည်အထိ ချဲ့ထွင်လာကြသည်။ ၎င်းင်းတို့အထဲတွင် လူတစ်ဦးချင်း၏ တည်နေရာကို ကိုယ်တိုင်ဖော်ပြထားနိုင်ပြီး အခြားသူများကို ဖိတ်ခေါ်နိုင်သည့် ပထ၀ီလူမှုကွန်ရက် (geosocial networ king – GSN) application များလည်း ထွက်ပေါ် လာလျက်ရှိသည်။ Grindr ၊ Scruff ၊ Recon အစရှိသည့် GSN application များကို အမျိုးသားအချင်းချင်း လိင်ဆက်ဆံသူများအကြား အမည်မဖော်လိုသူ အမျိုးသားအချင်း ချင်းတွေ့ဆုံနိုင်ရန် အများဆုံးအသုံး ပြုကြသည်။
၂၀၁၁ သြဂုတ်လမှ ၂၀၁၃ ဇန်န၀ါရီလအတွင်း HIV ကင်းစင်သောအမျိုးသားအချင်းချင်း လိင်ဆက်ဆံသူ (၇၁၈၄) ဦးထံမှ သတင်းအချက်အလက်များကို အင်တာဗျူး ပြုလုပ်၍ စုဆောင်းခဲ့သည်။ (၃၄) ရာခိုင်နှုန်းမှာ လူချင်းတွေ့ဆုံ၍ အချိန်းအချက်ပြုလုပ်ကြပြီး (၃၀) ရာခိုင်နှုန်းမှာ လူချင်းတွေ့သည့် နည်းနှင့် အင်တာနက်မှ ဆက်သွယ်နည်းနှစ်မျိုးစလုံး အသုံးပြုကြသည်။ (၃၆) ရာခိုင်နှုန်းမှာ ဖုန်း application များအသုံးပြု၍ ဆက်သွယ်ကြသည်။
၎င်းတို့အနက် ဖုန်း application များ အသုံးပြုဆက်သွယ်သူများသည် အခြားသူများထက် ဂနိုရောဂါကူးစက်ခံရမှု (၂၃) ရာခိုင် နှုန်းပိုမိုများပြားပြီး chlamydia ပိုးကူးစက်ခံရမှု (၃၅) ရာခိုင်နှုန်း ပိုမိုများပြားသည်ကို တွေ့ရသည်။ ဖုန်း application များသည် အထူးသဖြင့် အသက် (၄၀) အောက် အမျိုးသားအချင်းချင်း လိင်ဆက်ဆံသူများ အကြား ပိုမိုရေပန်းစားသည်ကိုတွေ့ရပြီး လူဖြူများနှင့် အာရှနွယ်ဖွားများ ပိုမိုအသုံးပြုကြသည်။
ဖုန်း application များသည် အခြားနည်းလမ်းများထက် အသုံးပြုရပိုမိုလွယ်ကူခြင်းကြောင့် ဖုန်း application သုံးသည့် အမျိုးသား များအကြား တွေ့ဆုံမှုအကြိမ်ရေ ပိုမိုနိုင်ပြီး လူပေါင်းစုံနှင့်တွေ့ ဆုံနိုင်ရန် အခွင့်အလမ်းပိုများခြင်းကြောင့် ရောဂါကူးစက်မှု ပိုများခြင်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်း သုတေသီများက ယူဆကြသည်။
ထိန်းသိမ်းခံ ယူနတီ သတင်းထောက်များကို အီတလီက ဂုဏ်ထူးဆောင်မြို့သားအဖြစ် ချီးမြှင့်
ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လ ၁၇ ရက်နေ့ ရုံးထုတ်စဉ်က (ဓာတ်ပုံ – Robert San Aung’s)
နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက် ပေါက်ကြားမှုနဲ့ တရားရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ယူနတီဂျာနယ်မှ အမှုဆောင် အရာရှိချုပ်နဲ့ သတင်းထောက် ၄ ဦးတို့ကို အီတလီနိုင်ငံ ဆာလာဘာဂန်ဇာမြို့ရဲ့ ဂုဏ်ထူးဆောင်မြို့သားအဖြစ် ချီးမြှင့် အသိအမှတ် ပြုလိုက်ပါတယ်။
လွတ်လပ်တဲ့ နိုင်ငံ တနိုင်ငံ မှာ ဒီမိုကရေစီရဲ့အခြေခံက သတင်းအချက်အလက် လွတ်လပ် မှု ဖြစ်တာကြောင့် သတင်းစာနယ်ဇင်း ကနေ တဆင့် ကျင့်သုံးလုပ်ဆောင် သွားတဲ့ ယူနတီဂျာနယ် အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် ဦးတင့်ဆန်း၊ သတင်းထောက် ဦးရာဇာဦး၊ ဦးပိုင်သက်ကျော်၊ ဦးစည်သူစိုးနဲ့ မြို့ခံသတင်းထောက် ဦးလူမော်နိုင်၊ တို့ကို ဂုဏ်ထူးဆောင်မြို့တော်သားတွေအဖြစ် ဂုဏ်ပြုဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလို့ ဆာလာဘာဂန်ဇာမြို့တော်ဝန် ခရစ္စတီနာ မယ်ရူစီက ဒီဗွီဘီကို ပြောပါတယ်။
ခုလို ဂုဏ်ပြုခံရတဲ့သတင်းကို ထိန်းသိမ်းခံနေရတဲ့ သတင်းထောက်တွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ မိသားစုတွေကလည်း ၀မ်းသာ ဂုဏ်ယူနေကြတယ်လို့ အမှုလိုက်ပါ ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ ရှေ့နေ ဦးရောဘတ်စန်းအောင်က ဒီဗွီဘီကို ပြောပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်န၀ါရီလက မကွေးတိုင်း ပေါက်မြို့နယ်က ဓာတုလက်နက်စက်ရုံလို့ ယူဆရတဲ့ အစိုးရ တည်ဆောက်နေဆဲ အဆောက်အဦတခုအကြောင်း သတင်းဖော်ပြချက်ကို ယူနတီဂျာနယ်မှာ ဖော်ပြထုတ်ဝေလိုက်တဲ့အတွက် နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက်ပေါက်ကြားမှုနဲ့ ဂျာနယ် သတင်းထောက်တွေနဲ့ အရာရှိတဦးကို ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတာပါ။
ဇွန် ၃၀ ရက်နေ့ နောက်ဆုံး တရားရုံးထုတ်မှာ ဖြစ်ပြီး အပြီးသတ် စီရင်ချက် ချမယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။
ဆာလာဘာဂန်ဇာမြို့တော်ဝန် မယ်ရုစီကတော့ ယူနတီသတင်းထောက်တွေဟာ ခုဆို သူတို့မြို့သား ဖြစ်သွားပြီလို့ ဆိုနိုင်တာကြောင့် ဒီသတင်းထောက်တွေရဲ့ ကံကြမ္မာတွေဟာ သူတို့မြို့သားအားလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ယူနတီဂျာနယ် သတင်းထောက်တွေကိုလည်း မြို့တော်သားအဖြစ် ဂုဏ်ပြုခန့်အပ်လွှာကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ လာရောက် လက်ခံနိုင်ဖို့ ဖိတ်ကြားချင်ပါတယ်လို့ မြို့တော်ဝန်က ပြောသွားပါတယ်။
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲဟာ လွတ်လပ်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖို့အတွက် စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့် အပြည့်အ၀ ရရှိဖို့ လိုအပ်ပြီး ယူနတီဂျာနယ်သတင်းထောက်တွေ ဖမ်းဆီးခံရမှုရနေ အခက်အခဲတွေကို မြင်တွေ့နေရတာကြောင့် အဲဒီသတင်းထောက်တွေအတွက် ကူညီပေးချင်နေပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်မှန်တဲ့ သတင်းအချက်အလက် လွတ်လပ်ခွင့် ရှိစေချင်တယ်လို့ အီတလီ-မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေးအသင်းဥက္ကဋ္ဌ ဂွီဆက်ပယ် မာလ်ပယ်လီက ပြောပါတယ်။
ခုလို ဂုဏ်ထူးဆောင်မြို့သားဆု ချီးမြှင့်လိုက်တဲ့သတင်းကိုလည်း သမ္မတဦးသိန်းစိန်၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးကိုကိုနဲ့ နိုင်ငံတော်ရှေ့နေချုပ် ဦးထွန်းရှင် တို့အပါအ၀င် အဆင့်မြင့် မြန်မာအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေဆီ ပေးပို့ထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဆာလာဘာဂန်ဇာမြို့ဟာ အီတလီနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း ပါးမားအနီးက လူဦးရေ ၅ သောင်း ၅ ထောင်လောက် နေထိုင်ကြတဲ့ မြို့ငယ်လေး ဖြစ်ပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မှ စစ်ဆေးရေးဂိတ်များတွင် ယခလို စာတန်း ချိတ်ဆွဲထားသည်။ (ဓါတ်ပုံ- နိရဉ္စရာ)
ယခု တောထဲတွင် ချထားခဲ့သူ အရေအတွက်မှာ ၁၁ ဦးဖြစ်ပြီး ယခု ၁၀ ဦးကိုသာ ဖမ်းမိသဖြင့် နောက်ထပ် တစ်ဦး ပျောက်ဆုံးနေသည်ဟုလည်း သူက ဆက်လက် ပြောဆိုသည်။
ယခု အခါ ဖမ်းဆီးမိသူ ဘင်္ဂလီ (၁၉) ဦးစလုံးအား အမ်းမြို့နယ်ရဲစခန်းတွင် ချုပ်နှောင်ထားပြီး တည်ဆဲ ဥပဒေများနှင့် အညီ အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု သိရသည်။
အမ်းမြို့သည် ရခိုင်ပြည်နယ်မှ ဗမာပြည်မသို့ သွားရာ ကားလမ်းပေါ်ရှိ ရခိုင်ရိုးမတောင်ခြေရင်းတွင်တည်
ရှိပြီး ဌာနပေါင်းစုံဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော လူဝင် လူထွက် စစ်ဆေးဂိတ်များလည်း တည်ရှိသည်ဟု သိရသည်။
မိမိအမျိုးသမီး အိမ်ထောင်ရေးအပေါ်တွင် သာယာမှုရှိ မရှိ ဘယ်လိုခန့်မှန်းနိုင်မလဲ
University of Pittsburgh မှ လေ့လာမှုတစ်ခုအရ အိမ်ထောင်ရေးမှာ စိတ်ကျေနပ်မှုရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတွေက မိမိတို့ဘ၀လက်တွဲဖော်နဲ့ အိပ်စက်ချိန်၊ အိပ်ယာနိုးချိန်တို့ တပြိုင်ထဲ ဖြစ်ပွားလေ့ရှိကြောင်း သိရပါတယ်။ ရလဒ်များအရ တအိပ်ယာထဲမှာ အတူတူအိပ်လေ့ရှိတဲ့ စုံတွဲများက အိပ်ယာဝင်ချိန်နှင့် အိပ်ယာထချိန်တူညီမှု ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီး အကယ်၍ အမျိုးသမီးက မိမိအိမ်ထောင်ရေးအပေါ် သာယာမှု ပိုရှိပါက အိပ်ယာထချိန်၊ နိုးချိန် ပိုမိုတူညီကြောင်း သိရသည်။ လေ့လာသူခေါင်းဆောင် health Gunn, Ph.D, က ““စုံတွဲများအိပ်စက်မှုပုံစံက ၎င်းတို့၏ ဆက်ဆံရေးအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိစေပြီး ၎င်းတို့ ဆက်ဆံရေးကလည်း အိပ်စက်မှုပုံစံအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိစေသည်””ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ ““လေ့လာမှုမှာ မေးမြန်းထားသည့် မေးခွန်းများကို လိုက်နာ ဖြေကြားထားသည့်စုံတွဲ ၄၆တွဲအား အိပ်စက်မှုပုံစံကို လေ့လာခဲ့ရာ လက်ထပ်ပြီးသည့် စုံတွဲများ အိပ်ချိန် နိုးထချိန်ပိုတူပြီး၊ လက်မထပ်မီ အတူ နေသူများက လက်ထပ်ပြီးသူများလောက် တူညီမှုမရှိကြောင်း တွေ့ရပါတယ်။ ယင်းအချက်ကို ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိပ်စက်မှုပုံစံတွေက ကျွန်တော်တို့ ဘယ်အချိန်မှာ အိပ်တယ်ဆိုတာ သာမက၊ ဘယ်သူနဲ့ အိပ်တယ်ဆိုတာတွေကြောင့်ပါ ပြောင်းလဲနိုင်တယ်လို့ ဆိုလိုပါတယ်””ဟု လေ့လာသူများက အဆိုပြုခဲ့သည်။
ဆရာ အနောက်နိုင်ငံက ကလေးတော်တော်များများကို Pacifier ကိုပေးသုံးတာတွေ့ ရပါတယ်။ အဲ့ဒါ ဘာအတွက်ကြောင့် သုံးတာလည်းဆိုတာ သိချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Pacifier ဆိုတာ အမေရိကန်သုံးအင်္ဂလိပ်ဖြစ်တယ်။ ဗြိတိသျှလို Dummy ခေါ်တယ်။ တချို့နေရာတွေမှာ Binky ခေါ်တယ်။ တချို့က Soother လို့လဲခေါ်ပါတယ်။ ကလေးပါးစပ်ထဲမှာ ကလေးနေအောင် ထည့်ပေးထားတဲ့ ပလပ်စတစ်၊ ရာဘာ၊ စီလီကွန်နဲ့လုပ်ထားတာလေးဖြစ်တယ်။ မြန်မာလို ‘ချိုလိမ်’ ခေါ်တာများတယ်။ ကလေးတွေ ငယ်ကတည်းက လူကြီးတွေ လိမ်တာ၊ ညာတာခံရတဲ့သဘောဖြစ်တယ်။
Teat ကလေးပါးစပ်ထဲထည့်တာ၊ Mouth shield ပါးစပ်ကာနဲ့ Handle လက်ကိုင်ဆိုပြီး အစိတ်အပိုင်း (၃) ခုပါတယ်။ အမေရိကန် ကလေးသွားအကယ်ဒမီရဲ့ လက်မ၊ လက်ချောင်းနဲ့ ချိုလိမ်ဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်အရ ကလေးတွေဟာ အသက် ၂ နှစ်ကနေ ၄ နှစ်အတွင်းမှာ လက်မစုပ်တာ၊ ချိုလိမ်စုပ်တာ ရပ်သွားပြီ။ တချို့ကလေးတွေက ပိုကြာတယ်။
ဗြိတိသျှ သွားဖေါင်ဒေးရှင်းကလဲ ချိုလိမ်စုပ်တာနဲ့ လက်မစုပ်တာကို အားမပေးပါ။ Mayo Clinic Staff ‘မေးယိုးကလင်းနစ်’ ကလဲ ထောက်ပြထားတာရှိပါတယ်။ တချို့ကလေးတွေက Sucking reflex စုပ်တဲ့တုန့်ပြန်မှုမှာ ပိုသန်ကြတယ်။ တချို့ကလေးတွေဆိုရင် ဗိုက်ထဲမှာရှိကတည်းက လက်မစုပ်တယ်။
Pros ကောင်းချက်တွေ -
• အဲလိုအကျင့်ကနေ Soothing effect ကလေးကို ငြိမ်စေတဲ့အစွမ်းနဲ့ Calming effect အငိုတိတ်စေတာ ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အကျိုးရပါမယ်။ ဒါကြောင့်လဲ မိဘတွေကသုံးတာဖြစ်တယ်။
• ကလေးကို ယာယီအားဖြင့် အာရုံပြောင်းပေးမယ်။ ကာကွယ်ဆေးထိုးတာ၊ သွေးဖေါက်တာလုပ်ကာနီးမှာ သုံးနိုင်တယ်။
• ကလေးကို အိပ်စေနိုင်တယ်။
• ကားစီး၊ လေယျဉ်စီးတဲ့အခါမှာလဲ ကလေးကို စိတ်အေးစေမယ်။
• (SIDS) ခေါ်တဲ့ ရုတ်တရက်အသက်သေနိုင်တဲ့ရောဂါကိုလဲ နည်းစေနိုင်မယ်လို့ ယူဆသူရှိသေးတယ်။
Cons မကောင်းတဲ့အချက်တွေ -
• ကလေးငယ်ငယ်လေးကတည်းက ချိုလိမ်တပ်ပေးရင် နို့စို့တာကို ခက်စေနိုင်တယ်။ မိခင်နို့ထက်ပိုလွယ်လို့ ကလေးကအလွယ်ကြိုက်မယ်။
• ကလေးက အဲတာကိုသာ မီခိုချင်စိတ်ရှိလာမယ်။ အဲတာမပါရင် မအိပ်ချင်တာဖြစ်နိုင်တယ်။
• နားအလယ်ပိုင်းပိုးဝင်တာ ပိုဖြစ်နိုင်တယ်။ % နည်းပါတယ်။
• သွားဒုက္ခ္ခပေးနိုင်တယ်။ ကြာနေရင် ကလေးအပေါ်ရှေ့သွားလေးတွေက နှုပ်ခမ်းဆီငေါထွက်နိုင်တယ်။ သိပ်ကြာနေရင် ကိုက်ဝါးရာမှာ ထိခိုက်စေနိုင်တယ်။ မေးရိုးဖွံ့ထွားမှုကိုလဲ သက်ရောက်နိုင်တယ်။
အလုပ် နဲ့ အိမ်ဝေး ခြင်းကြောင့် လမ်းမှာ အချိန်ကုန်များ သူများ၏ ကျန်းမာရေး အခြေအနေကို အမေရိ ကန် နိုင်ငံ တွင်ကောက်ယူထားသောစစ်တမ်းတစ်ရပ်အား ကိုးကား ၍တစ်ဆင့်ပြန် လည်တင်ပြ သွား မည်ဖြစ် သည်။ မော်တော်ကား ပေါသော အမေရိကန်များသည် မကျန်းမာမှုလည်း ပေါများသောသူများဖြစ်သည်ဟု ဆို သည်။ မော်တော် ကားများ သည် အမေရိကန် ၏ စီးပွားရေး တိုးတက် မှုကို ကြီးစွာ အထောက် အကူပြု ခဲ့ သလို၊ ဘိုးဘေး ဘီဘင်များ ခေတ်က စိတ်ပင်မကူးဖြစ် ခဲ့သော အလုပ်များ စွာကို လည်း မော်တော်ကား များ ကြောင့် လုပ်နိုင်ခဲ့ကြသည့် အကျိုးကျေးဇူးများရခဲ့သည်ကား မှန်သည်။ သို့သော် တစ်ချိန် တည်းမှာပင် ဘယ် သွားသွား ကားထိုင်မောင်းပြီး အလှုပ်အရှားနည်းစွာ သွားလာကြခြင်း အကျိုးဆက် အဖြစ် ကိုယ်လက် လှုပ်ရှားမှု က နည်းလာ သည်။ ကိုယ်စိတ် ကျန်းမာရေးကအစ အလုံးစုံ ပျက်ယွင်း လာ သည့် ဆိုးကျိုး ကို ခံစားရ တော့ သည်။
ခေတ်၏ အသုံး အဆောင် များဖြစ် သော တီဗီ၊ ကွန်ပျူတာ၊ စမတ်ဖုန်း၊ အ၀တ်လျှော် စက် စသည် တို့ ထဲတွင် မော်တော်ကား လောက် အချီး မွမ်းလည်း ခံရသလို၊ အကဲ့ရဲ့ လည်း ခံရ သော စက်ပစ္စည်းမရှိသေး။ ချီးမွမ်း ခံရ သည့်ဘက် တစ် ချက်ကြည့် ကြစို့။ မော်တော်ကား ၏ ကောင်းကျိုး များ ကလည်း မြင်သာ သည်။ ပိုကောင်း သောဘ၀ များ ထူထောင်ရေး၊ ပိုကောင်းသော အလုပ် များ လုပ်နိုင်ရေးအတွက် မော်တော်ကားများ သုံးကာ ကျွန်ုပ် တို့ အရပ် မျက်နှာ ပေါင်းစုံ သို့ ခရီးဆန့် နိုင်ကြ သည်။ ကုန်စည် ပစ္စည်း များ ကို တစ် နေရာမှ တစ် နေရာ လွယ်ကူ လျှင်မြန်စွာ ပို့ ဆောင်နိုင် မှုကြောင့် နယ်မြေ ဒေသ မကွဲပြား ဘဲ ဒေသအသီးသီးက ထွက် သော ရာသီပေါ် စားသောက် ကုန် များကိုပါ ကျန်ဒေသများက ပါ တစ်ချိန်တည်း စားသုံး နိုင်ကြသည်။ ပူပူ နွေး နွေး အစားအစာများကိုပင် အိမ်ရှေ့တံခါး အရောက် အမြန်ဆုံးနည်းဖြင့် လာပို့ ပေးနိုင် ကြသည်။ အခြားများစွာ သော အကျိုးကျေး ဇူးများလည်း ရှိသေးသည်။
ကောင်းကျိုးရှိလျှင် ဆိုးကျိုးအတွက် လည်း ပြန်ပေးဆပ်ရသည့် နိယာမကို ကားများ ကလည်း အပြည့် အ၀ လိုက်နာ ကြသည်။ ကားများက လူသားများ၏ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက် စေနိုင်ပုံ၊ အထူးသဖြင့် ကားကို အ ချိန် ကြာမြင့်စွာ စီးနင်း သွားလာရသူ များအတွက် ကားက ကျန်းမာရေး ဒုက္ခ ပေး နိုင်ပုံ များကို နယူးယောက် တိုင်းမ် သတင်းစာတွင် ဆောင်း ပါး တစ် ပုဒ်ဖြင့် ဖော် ပြထား သည်။ အဓိက အချက် အချို့ကို အောက် တွင် ကောက်နုတ် ဖော်ပြပါမည်။
တက္ကဆက်ပြည်နယ် တွင် ပြုလုပ် ထား သော စစ်တမ်း တစ်ရပ် အရ လူတစ် ယောက် ကား ကြာကြာ စီးချိန် နဲ့ သွေးတိုး နဲ့ တိုက်ရိုက် ပတ်သက် နေကြောင်း တွေ့ ရှိခဲ့ ရသည်။ ကား ကြာ ကြာစီးပြီး ခရီး ကြာကြာ သွားရ လေ ထို သူသည် သွေးတိုး ဝေဒနာ ခံစား ရနိုင် ခြေ ပိုများ လေဖြစ် ကြောင်း စစ်တမ်း အရ သိရ သည်။ တစ်ခေါက် လျှင် ဆယ်မိုင် နှင့်အထက် တောက် လျှောက် ကားစီးပြီး သွားလာ ရခြင်း သည် သွေးတိုး ဝေဒနာ ခံစားရ စေမည့် စိုးရိမ် ရေမှတ်ဖြစ်ကြောင်း စစ်တမ်း က ထောက်ပြ သည်။ ဆွီဒင် နိုင်ငံ ယူမီယာ တ က္ကသိုလ် က ပြု လုပ် ထားသော လေ့လာ မှုစစ်တမ်း တစ်ရပ် အရလည်း အလားတူ စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ရ သည်။ အနည်းငယ် ကွာခြား သည်မှာ ထို လေ့ လာမှု က စိုးရိမ်မှတ် ကို ၁၅ မိုင် အဖြစ် သတ် မှတ်ခြင်း ဖြစ် သည်။
သွေး တွင်း သကြား ဓာတ်နှင့် ကိုလက် စထ ရောဓာတ် ပိုများ လာခြင်း
တက္ကဆက်တွင် ပြုလုပ်ထားသော စစ် တမ်းမှာ ပင် နောက်ထပ် တွေ့ရှိချက် တစ်ရပ် ကား အလုပ် လာ လျှင် ဆယ်မိုင် နှင့် အထက်၊ ပြန်လျှင် ဆယ်မိုင် နှင့် အထက် စသဖြင့် ခရီး စဉ် တစ်ကြောင်းလျှင် ဆယ်မိုင် နှင့် အထက် ကားစီးရသော အလုပ်ဝန်ထမ်းများသည် အ ခြား ခရီးတို လောက်သာ လာရသော ၀န်ထမ်း များ နှင့် ယှဉ် လျှင် သွေးတွင်း သကြား ဓာတ် ပါ ၀င်မှု နှင့် ကို လက်စ ထရော ဓာတ် ပါဝင် မှု သိသိ သာသာ ကို များ ပြား နေကြောင်း လေ့လာ တွေ့ ရှိခဲ့ရ သည်။ သွေးတွင်း သကြား ဓာတ်နှင့် ကိုလက်စထရော ဓာတ် များပြား ခြင်း သည် ဆီးချို၊ နှလုံး ဖြစ်ပွား အောင် ဖိတ်ခေါ်နေသကဲ့ သို့ ရှိသည်။
စိတ်ကျ စိတ်ဖိစီး စိတ်ရှုပ်ခြင်း
ခရီးစဉ် တစ်ကြောင်းလျှင် ဆယ်မိုင်နှင့် အထက် ကားစီးပြီး အလုပ်တက် အလုပ်ဆင်း လုပ်ရသူများ၏ စိတ်အပေါ်လည်း ခရီးရှည် ခရီးသွားရခြင်းက ၀န်ပိမှု ဖြစ်စေကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ရပြန်သည်။ အခြား ၀န်ထမ်းများ နှင့် ယှဉ်လျှင် ထိုသူများ သည် စိတ်ဓာတ် ကျ ခြင်း ဒဏ် ပိုခံစား ရသလို၊ လွယ်လွယ် နှင့် စိတ်ရှုပ် တတ်ကြ သူ များဖြစ်ကြောင်းလည်း တွေ့ရ သည်။ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့် စိတ်ဖိစီး စိတ် ရှုပ်ခြင်းသည် ဘ၀သာယာ မှုကို ထိ ခိုက်စေရုံ သာမက၊ ခန္ဓာ ကိုယ် ခုခံ အားစနစ် ကို အား နည်း ပျက်စီး စေသော ကော်တီ ဇုန်းဓာတ်များ ပိုထွက် စေသဖြင့် လည်း ဘက်စုံ ကျန်းမာရေး ထိခိုက်ကာ အသက်ပါ ပိုတိုစေနိုင်စွမ်း ရှိနေ ပြန်သည်။
ဆွီဒင် နိုင်ငံ လန်း တက်္ကသိုလ်က ပြုလုပ် ထားသော လေ့လာမှု စစ်တမ်း တစ်ရပ် အရ လည်း အလုပ်နဲ့ ပိုဝေးဝေး နေရာမှာ နေလေ၊ ထိုဝန်ထမ်း သည် မောပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းဒဏ်၊ အိပ်ရေးမ၀ ခြင်းဒဏ် နှင့် ဖျားနာမှု ဒဏ် များ ပိုခံရနိုင် ခြေရှိ ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ ရပြန် သည်။ အမေရိကန် နိုင်ငံတွင် ပြု လုပ်ထား သော စစ် တမ်း တစ်ရပ် ကလည်း အလား တူ ရလဒ် ကို ပြသ နေပြန်သည်။ လောင်း အိုင်လင်း ရှိ ကုမ္ပဏီ များ သို့ အလုပ်လာ ဆင်းသူ များကို စစ်တမ်း ကောက်ကြည့် ရာ အလုပ်နဲ့ အိမ်နဲ့ ဝေးလေ ထိုသူများ သည် အထက် ပါ အတိုင်း ပို မောပန်း နွမ်းနယ် တတ်ကြ သလို၊ ပို၍ လည်း အိပ်ရေး ပျက်ခြင်းဒဏ် ပိုခံစား ကြရ ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ ရသည်။ ကားနဲ့ သွား လာရခြင်း သည် ကြာကြာ စီးရလေ စီး သူကို ကျန်းမာရေး ပိုင်း ပိုထိခိုက် စေ လေဖြစ် ကြောင်းကို အထက်ပါ စစ်တမ်း များက ထောက်ပြနေကြသည်။
အထိုင် များလေ ခါးတုတ် လေ ဆိုသည် မှာ ယေဘုယျ မှန်ကန် သော သဘောတရား တစ်ခု ဖြစ်နေပြီ။ ယခုလည်း ကားကြာကြာစီး သွားလာရသူများ ကားပေါ်မှာ အထိုင်များ ခြင်း အကျိုးဆက်အဖြစ် ခါးတုတ်သူများ ဖြစ် လာကြ သည်။ လေ့လာမှု စစ်တမ်း များက လည်း ထို အချက် မှန်ကန် ကြောင်း ထောက်ခံ နေကြ သည်။ အထူး သဖြင့် အလုပ်မှာ လည်း အထိုင် များ သူများ၊ အလုပ်သွား အလုပ်ပြန်မှာ လည်း ကား ပေါ်မှာ ချည်း အ ထိုင်များ ကာ အချိန် ကုန် သူ အများစု သည် အ၀လွန် ဝေဒနာ ခံစားရသူများ ဖြစ် လာကြ ကြောင်း ဖြင့် တက္ကဆက် လေ့လာမှု စစ်တမ်းက ထောက်ပြလိုက် သည်။
အထိုင် များခြင်း ကြောင့် ခန္ဓာကိုယ် ထိခိုက်ခြင်း ကို ကာကွယ်ဖို့ အကောင်းဆုံး လမ်းကား တက်ကြွ လှုပ်ရှား သော ဘ၀ နေမှု ပုံစံ ပျိုးထောင်ယူရေး ဖြစ်သည်။ အားရ ဖွယ် သတင်း ကောင်းကား ယခု နောက်ပိုင်း အမေ ရိကန်များ သာမက ကမ္ဘာ့ တစ်ဝန်း မော်တော် ကား အသုံး ပြုနှုန်း များ လျော့နည်း လာခြင်း ဖြစ်သည်။ ဆယ်ကျော်သက်များ လိုင်စင် လျှောက်ထားနှုန်းများလည်း ကျဆင်းလာ သည်ကို တွေ့နေရသည်။ အထိုင် များ ခြင်း၏ ကျန်းမာရေး ဆိုးကျိုးများကို သိရှိလာပြီး နောက်ပိုင်း မြို့အတော် များများ မှာပါ ကားစီး သွား လာခြင်း ထက် စက်ဘီးဖြင့် သွားလာခြင်း၊ လမ်း လျှောက် သွားခြင်းကို အားပေး သည့် မြို့ ပြ အနေ အထား များ ထူ ထောင် လာ ကြပြီ။
ကားများသည် သွားလာရေး မြန်ဆန် စေသည်မှန်သော်လည်း တန်ပြန်ဆိုးကျိုး အနေဖြင့် လူသားများ ၏ ကျန်းမာရေးကို ခြိမ်းခြောက်လာနေရာ ကားများနှင့် သဟဇာ တဖြစ်အောင်၊ ကျန်းမာရေး မထိခိုက်အောင် ကားများကို လူသားများ အသုံးပြုနိုင်ကြ မည်လား စောင့်ကြည့်လေ့လာသွားရမည် ဖြစ်သည်။
Ref:5ways your commute could be killing you By Richard Read
ဒွေး ကွယ်လွန်ခြင်း ၇နှစ်ပြည့်မှာ ထူးထူးခြားခြားအစီအစဉ် တစ်ခုလုပ်ဖို့ရှိတယ် ဆိုတဲ့ သားညီ
သားညီလို့ ပြောလိုက်ရင် အားလုံးက ဒွေးရဲ့ညီဆိုပြီး တန်းမြင်မိကြမှာပါ။ ဒွေးရှိစဉ်တုန်းက သူတို့ ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်ကို ဇာတ်ကားတွေထဲမှာ တပူးတွဲတွဲ မြင်နေရသလို သဘာဝဆန်တဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့်လည်း ပရိသတ်တွေ ရင်ထဲနေရာယူနိုင်ခဲ့ကြတာ အားလုံးအသိပါ။ ခု ကိုသားကြီးလို့ခေါ်တဲ့ ဒွေးဆုံးပါးသွားပြီးတဲ့နောက် သားညီကိုလည်း အနုပညာနယ်ပယ်မှာ မတွေ့ရသလောက်ဖြစ်သွားပြီး ခုနောက်ပိုင်းမှ ပြန်မြင်ရတာမို့ ကိုသားကြီးရှိစဉ်တုန်းကအချိန်တွေနဲ့ ခုချိန်ကွားခြားချက်တွေ၊ အဲ့ဒီကြားထဲ ကြုံခဲ့ရတဲ့ အခက်အခဲတွေကို သူက ခုလိုပြောပြသွားပါတယ်။ “ ကိုသားကြီး ရှိစဉ်တုန်းကဆို ကျွန်တော့်ဘ၀ရဲ့ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်က သူ့ကိုမှီခိုနေရတာ။ လူပျိုဘ၀ကဆိုရင် တစ်လကို သူနဲ့ ၃ကား ၄ကားပုံမှန်ရိုက်ဖြစ်တယ်။ ဘာမှစိတ်ပူစရာမလိုဘူး။ ကားရိုက်လဲရှိတယ်။ ၀င်ငွေပုံမှန်ရှိတယ်။ အိမ်ရှိတယ်။ အိမ်လခ ပေးစရာမလိုဘူး။ ကားတစ်စီးရှိတယ်။ သူရုတ်တရက် ဆုံးပါးတဲ့ချိန်မှာ အိမ်ထောင်စကျပြီ။ အိမ်ငှားနေရပြီ။ ကားမရှိတော့ဘူး။ အဲလိုမျိုးလေးတွေပေါ့။ ရုတ်တရက် ချက်ချင်းကြီး ပြောင်းလဲသွားတာပေါ့။ ကျွန်တော် ခုပြန်ရိုက်တဲ့ချိန်မှာ အရင်ကလောက်ပျော်ဖို့မကောင်းတော့ဘူး။ ခုလာမဲ့ ၇လပိုင်းဆို ကိုသားကြီး ၇နှစ်ပြည့်လဲရှိတော့ ဒီနှစ်မှာ သူ့အတွက် ထူးထူးခြားခြား အစီအစဉ်လေး တစ်ခုလုပ်ဖို့ ရှိပါတယ်။ အဲဒါ အဲ့နေ့ကျမှပဲ ကျွန်တော် ကြေညာပါ့မယ်။ ကျွန်တော်တို့ သူ့အတွက် အမှတ်တရ အစီအစဉ်လေး တစ်ခုလုပ်မလို့ပါ။ အဓိက အိုင်ဒီယာစရတာက ကိုညိုပါ။ ကိုညိုက ဘယ်သူ့မှမပြောပါနဲ့ဦးဆိုလို့ပါ။ ကျွန်တော်တောင် မစဉ်းစားမိတဲ့ အရာလေးတစ်ခုကို သူလုပ်ပေးမှာပါ။ သူစဉ်းစားပေးမှာပါ။ အဲဒီအတွက်ကိုညို့ကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်” လို့ သူက ပြောပြသွားပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်မောင်မောင်အုန်းကို ရခိုင်ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်တွင် ကန့်ကွက်သူမရှိ အတည်ပြု
ရန်ကုန်- ဇွန်လ ၃၀ ရက်ကပြုလုပ်သော ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်အရေးပေါ်အစည်းအဝေးတွင် ဗိုလ်ချုပ်မောင်မောင်အုန်းကို ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် ခန့်အပ်ရန်အဆို ကို ကန့်ကွက်သူမရှိ အတည်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
‘‘ဒီနေ့လွှတ်တော်က အတည်ပြုလိုက်ပြီ သမ္မတဆီကို သဝဏ်လွှာပြန်ပို့ထားတယ်’’ဟု ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်မြကျော်က ပြောသည်။
ဇွန်လ ၂၅ ရက် လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် ဗိုလ်ချုပ်မောင်မောင်အုန်းက တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုခဲ့ပြီး လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌက ၎င်းကို ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် ခန့်အပ်ရန် အဆိုပြုထားသော နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ သဝဏ်လွှာကိုဖတ်ကြားခဲ့သည်။ ကန့်ကွက်လို သူများအနေဖြင့် ဇွန်လ ၂၇ ရက် နောက်ဆုံးထား၍ သက်သေအထောက်အထားခိုင်လုံစွာဖြင့် ကန့်ကွက်လွှာကို လွှတ်တော်သို့ပေးပို့ရမည်ဖြစ်သည်။
သို့ရာတွင် ကန့်ကွက်သူလုံးဝမရှိသည့်အတွက် ဇွန်လ ၃၀ အစည်းအဝေးတွင် ဗိုလ်ချုပ်မောင်မောင်အုန်းကို ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် အတည်ပြု လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ဦးအောင်မြကျော်က ပြောသည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတက အမိန့်ပြန်တမ်းစာထုတ်ပြန်ပေးပို့ပြီးပါက ဗိုလ်ချုပ်မောင်မောင်အုန်းက ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် လွှတ်တော်၌ ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုမည်ဖြစ်သည်။
(စာဖတ်သူကဏ္ဍ) သတင်းစာနဲ့ ဂျာနယ်တွေမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာအမျိုးသမီးတွေကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာအမျိုးသားတွေက ရက်ရက်စက်စက်ပြုမူနေကြတဲ့ သတင်းတွေ ဖတ်ရတာ တစ်နေ့တခြားများလာတဲ့အကြောင်းကို သူ ဖတ်ရတဲ့သတင်းတွေနဲ့ တင်ပြပြီး ရေးတဲ့ ပြည်မြို့က မခိုင်ခိုင်လဲ့ရဲ့ စာကို ဖတ်ရလို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာအမျိုးသမီးတွေအတွက် စိုးရိမ်မိပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာအမျိုးသမီးများရဲ့ အခွင့်အရေးကို အကာအကွယ်ပေးရန်ဆိုပြီး ဥပဒေတွေ ပြဋ္ဌာန်းဖို့ ကြိုးစားနေကြတဲ့သူတွေ၊ အမျိုးသမီးတွေ အကြမ်းဖက်မခံရဖို့ ကြိုးပမ်းနေတယ်ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးအဖွဲ့တွေ၊ လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့အဖွဲ့တွေ အများအပြားထွက်ပေါ်နေပြီး သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်တွေမှာ အကြီးကြီးတွေ ပြောနေကြပေမယ့် ထိရောက်တဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေ မတွေ့ရသေးဘူးလို့ ပြောပါတယ်။
နယ်အစွန်အဖျားဒေသတွေကို မဆိုထားနဲ့ ရန်ကုန်မြို့မှာတောင် အမျိုးသမီးတွေကို အမျိုးသားတွေက ရက်ရက်စက်စက် ပြုမူကြတာတွေကတော့ အံ့သြထိတ်လန့်စရာတွေပါပဲ။
၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ၁၉ ရက်နေ့က မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်မှာ ခင်ပွန်းဖြစ်သူက လူမဆန်စွာ ပြုမူခဲ့တဲ့ ထိုးသွင်းဒဏ်ရာ တစ်ချက်အပါအ၀င် ဖူးရောင်ဒဏ်ရာပေါင်း ၁၈ ချက်နဲ့ သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ ဆယ်တန်းကျူရှင်သင်တဲ့ ဆရာမ၊မထက်ထက်အေးကျော်ဟာ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်သလို သူ့ခင်ပွန်းလည်း မြန်မာဗုဒ္ဓပါ။
၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၂၃ ရက်ကလည်း ဒဂုံတောင်မြို့နယ်မှာ ကိုယ်ဝန်သည် အမျိုးသမီးတစ်ဦး ကလေးမွေးဖွားထားတဲ့ လက္ခဏာနဲ့အလောင်းကို တွေ့ရပြီး ဘေးမှာ မွေးကင်းစ ယောက်ျားကလေးတစ်ဦးရဲ့ အလောင်းကို တွေ့ရလို့ မှုခင်းဆရာဝန်ကြီးက စစ်ဆေးတဲ့အခါ သေဆုံးသူဟာ အရိုက်ခံရလို့ သတိလစ်နေချိန်မှာ လည်ပင်းကို လုံချည်နဲ့ ညှစ်သတ်ထားတာကြောင့် ဗိုက်ထဲမှာ ရေနစ်သေဆုံးရတဲ့အပြင် ဗိုက်မှာ အကန်ခံရလို့ သားအိမ်ပေါက်ပြီး ကလေးထွက်ကျကာ ကလေးမှာ ဗိုက်ပေါက်အူထွက် သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ ဒီလိုရက်ရက်စက်စက် ပြုလုပ်တဲ့သူကတော့ သေဆုံးသူ မအေးအေးအောင်နဲ့ ချစ်ကြိုက်ပြီး သားမယားအဖြစ် ဆက်ဆံတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာအမျိုးသားပါ။
ရေးမယ်ဆိုရင်တော့ ရေးစရာအမှုတွေ အများကြီးရှိနေပါတယ်။ အခုပြောတဲ့ သတင်းတွေမှာ ကျူးလွန်သူတွေဟာ မြန်မာလူမျိုး၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ ချည်းပါပဲ။ သူများတွေ မကောင်းတာတွေ ပြောနေကြမယ့်အစား ကိုယ့်လူမျိုး၊ ကိုယ်ဘာသာဝင်တွေ စိတ်ဓာတ်အဆင့်အတန်း မြင့်မားလာအောင်၊ လူပီပီသသနေတတ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲလို့ ၀ိုင်းဝန်းပြီး အဖြေရှာကြစေချင်ပါတယ်လို့ ရေးလာတဲ့စာကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
အိမ်တွင်းရေး မတည်ငြိမ်မှုက ကလေးငယ်၏ ဒီအင်န်အေကို ထိခိုက်စေနိုင်
အိမ်တွင်းရေး မတည်ငြိမ်မှုနှင့် ကြုံတွေ့ရသည့် ကလေးများသည် စိတ်ဒဏ်ရာ ရနိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ကြပြီးနောက် ယခုအခါ မိသားစုဝင်များ စိတ်ထိခိုက် ခံစားနေရသည် ကိုတွေ့မြင်ရသည့် ကလေးများသည် ဒီအင်န်အေ ထိခိုက်မှု ရှိနိုင်ကြောင်း ထပ်မံ တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။
အကြမ်းဖက်မှုများ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေမှုများကြောင့် မိသားစု ပြဿနာများဖြင့် ၀မ်းနည်း ပူဆွေးနေရသည့် လူငယ်များ၏ မျိုးစေ့ဗီဇရှိ တယ်လိုမီးယားသည် တည်ငြိမ်သည့် မိသားစုများရှိ တယ်လိုမီးယားထက် သိသိသာသာ ပိုတိုကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ တယ်လိုမီးယားတိုလာလေ စောစော သေဆုံးနိုင်ခြေ များလာလေဖြစ်သည်။
အဆိုပါ မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာ ပျက်စီးမှုမှာ ကလေးငယ်တွင် နှလုံးရောဂါ၊ အ၀လွန်ရောဂါနှင့် အရွယ် ရောက်လာသည် နှင့် တစ်ပြိုင်နက် တခြားသော ရောဂါများ ဖြစ်ပွားနိုင်မည့် အန္တရာယ် တိုးပွားလာနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
တယ်လိုမီးယား ဆိုသည်မှာ ဆဲလ်များပွားများရာတွင် ကျုံ့မသွားစေရန် ခရိုမိုးဆုန်းထိပ်ရှိ အဖုံးလေးများကို ဆိုလိုသည်။
ကလေး တစ်ယောက်ဟာ သူ့ဘ၀မှာ ထိတွေ့ရတဲ့ ခါးသီးမှုတွေ များလေလေ တယ်လိုးမီးယား ကလည်း ပိုတိုလေဖြစ် သည်။
ယင်းမှာ လူမှုစီးပွားရေး အခြေအနေ၊ မိခင်၏ ပညာရေး အဆင့်အတန်း၊ မိဘ အသက်အရွယ် နှင့် ကလေး၏ အသက် စသည့် တခြားသော အကြောင်းအရာများ နှင့်လည်း သက်ဆိုင်မှုရှိကြောင်း သိရသည်။
စိတ်ဒဏ်ရာ ရရှိမှုကြောင့် မိန်းကလေးများတွင် တယ်လိုမီးယား ပျက်စီးမှုမှာ ယောက်ျားလေးများထက် ပိုများကြောင်းလည်း သိရှိရသည်။
Credit: The Messenger
ကဲ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူက ဘယ်လိုယောင်္ကျားအမျိုးအစားလဲဆိုတာ တွဲလာတဲ့သက်တမ်းကို ကြည့်ပြီး ပျိုမေတွေ သိလောက်ပြီပေါ့နော်။ သူတို့ဟာ လက်ထပ်ဖို့ သင့်တော်သလား၊ မသင့်တော်ဘူးလားဆိုတာ ခွဲခြားနိုင်ဖို့ ဟောဒီအချက်ကလေး တွေကို ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။
၁။သူ့အလုပ်ကို သေမလောက် မုန်းနေတဲ့ ယောင်္ကျားမျိုး။
တစ်ရက်တစ်ရက် အလုပ်ကြောင့် စိတ်ပျက်လက်မှိုင်ချနေတတ်ပြီး အလုပ်ကိုလည်း မရှိလို့သာ လုပ်နေရတာ၊ သေမလောက် မုန်းနေတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီလိုယောင်္ကျားမျိုးကို ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက်အဖြစ် ရွေးချယ်ဖို့ သေချာစဉ်းစားပါ။ ဒီလို ယောင်္ကျားမျိုးဟာ ဒီ့ထက်ကောင်းတဲ့အလုပ်မျိုးကိုလည်း မရှာချင်ဘူး။ အလုပ်ကိုလည်း လက်ကြောတင်းအောင် မလုပ်ချင်တဲ့သူမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ကြာရှည် သင့်အချစ်ရေးကိုပါ ထိခိုက်စေလာနိုင်တာဖို့ သင်ပါ စိတ်ဆင်းရဲ ရမှာ အသေအချာပါပဲ။
၂။အလုပ်မှအလုပ် ဖြစ်နေတဲ့ ယောင်္ကျားမျိုး။
ပထမအချက်နဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်လို့ ဆိုရမှာပေါ့။ သူဟာ အလုပ်ကြိုးစားတယ်ဆိုတာမျိုးထက်ကို ပိုပြီး အလုပ်ကို နေ့မအား၊ ညမအားလုပ်တတ်တဲ့သူ ဖြစ်နေမယ်။ ကိုယ်လိုချင်တာတွေကို သူဝယ်ပေးလို့ ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်နိုင်မယ်ဆိုပေမယ့် ကိုယ့်အတွက် သီးသန့် အချိန်မပေးနိုင်တဲ့ ယောင်္ကျားမျိုးကလည်း အိမ်ထောင်ရေး သာယာစေဖို့ စွမ်းဆောင်နိုင်မယ်လို့ မမျှော်လင့်ပါနဲ့။
၃။အမေကို တုန်နေအောင် ကြောက်ရတဲ့ယောင်္ကျားမျိုး။
တစ်ချို့ယောင်္ကျားတွေဟာ အမေချစ်တဲ့ သားမျိုးတွေ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ အမေမှအမေ၊ အမေဘာပြောပြော အမေ့စကားနားထောင်မယ်။ ပြီးမှ ချစ်သူဖြစ်မယ် ဆိုတဲ့ ယောင်္ကျားမျိုးပေါ့။ အမေက သွားဆိုသွား၊ လာဆိုလာ၊ အသက်ရတဲ့အထိ အမေရဲ့ထိန်းကွပ်မှုအောက်မှာ ပိပြားလွန်းနေတဲ့ ယောင်္ကျားမျိုးဆိုရင်လည်း ဒါရှောင်သင့်တာပဲ။ စဉ်းစားကြည့်လေ။ ချစ်သူများနေ့မှာတောင် ကိုယ့်အတွက်ရော၊ အမေ့အတွက်ပါ ရေမွှေးအမျိုးအစားတစ်ခုတည်းကို တစ်ယောက်တစ်ပုလင်း လက်ဆောင်ဝယ်ပေးတတ်တဲ့ ယောင်္ကျား အိမ်ထောင်များကျရင် ဘယ်လိုဖြစ်မလဲလို့။
၄။သူ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ကိုယ့်ကို ဘယ်တော့မှ မဆုံပေးချင်တဲ့ ယောင်္ကျားမျိုး။
လူတစ်ယောက်ကို လေ့လာတော့မယ်ဆိုရင် သူ့ရဲ့အပေါင်းအသင်း၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပြောဆိုဆက်ဆက်ပုံကိုကြည့်ရင် ဒီလူဟာ ဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတာ သိပါတယ်။ သူကတော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးဖို့မပြောနဲ့ ကိုယ့်ဘက်က တွေ့ဖို့ပြောရင်တော့ ထားလိုက်ပါကွာ ဆိုပြီး ငြင်းဆန်တတ်သူဆို၇င်တော့ ဒါဟာ တစ်ခုခုမှားနေပြီမို့ ယူဖို့အထိ မတွေးဖို့လိုပါပြီ။
၅။ကိုယ်သူ့ကို ရွေးချယ်ခဲ့တာဆိုတာကို မယုံကြည်နိုင်တဲ့ ယောင်္ကျားမျိုး။
ဒါကို မြင်လိုက်ရင် ဟယ် ဒီလိုယောင်္ကျားမျိုးက ဘာများ မရွေးချယ်စရာရှိလို့လဲ။ ကိုယ့်ကိုတော်တော်ချစ်လို့ ဒီလိုတွေးတာပေါ့လို့ ထင်နိုင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုမရှိတဲ့သူမှသာ ဒီလိုစကားမျိုး ထပ်ခါထပ်ခါ ပြောတတ်တာပါ။ ကိုယ်ယူမယ့် ယောက်ျားဟာ ယုံကြည်မှုလွန်ကဲနေတာမျိုး မဖြစ်သင့်သလို ကိုယ်ကိုယ့်ကိုယ် လုံးဝယုံကြည်မှုမရှိတာမျိုးလည်း မဖြစ်သင့်ပါဘူး။
ဘယ်သူနဲ့ မှ မျှဝေမသုံးသင့်တဲ့ တစ်ကိုယ်ရည်သန့် ရှင်းရေးသုံးပစ္စည်း ခြောက်မျိုး
ကျွန်တော်တို့ အားလုံးနဲ့ အခုလို အခြေအနေမျိုးနဲ့ ကြုံဖူးပါလိမ့်မယ်။ သူငယ်ချင်းက ချွေးနံ့ ပျောက်ဆေး မေ့ခဲ့တာမျိုး ဒါမှမဟုတ် အခန်းဖော်က ဆပ်ပြာကုန်သွားတာမျိုးပေ့ါ။ အဲ့လိုအချိန်တွေမှာ သူတို့ ကို မကူညီ ဘူးဆိုရင်တော့ တော်တော်ရိုင်းသွားလိမ့်မယ်လို့ ခံစားမိမှာပေ့ါ။ ဒါပေမယ့် တစ်ချို့ ပစ္စည်းတွေကတော့ သင့်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ပဲ သုံးသင့်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းကို ဘယ်လောက်ချစ်ချစ် အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ သန့်ရှင်းရေးပစ္စည်း ခြောက်မျိုးကိုတော့ ဘယ်သူနဲ့ မှ မျှမသုံးသင့်ပါဘူး။
၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ဖလော်ရီဒါတက္ကသိုလ်က ဘောလုံးသမားတွေကို ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ လေ့လာမှုတစ်ခုအရ ဆပ်ပြာတုံး တွေ မျှသုံးတဲ့လူတွေမှာ MRSA လို့ ခေါ်တဲ့ ဆေးယဉ်ပါးနေတဲ့ဘက်တီးရီးယားပြည်တည်နာ ရောဂါပိုး ပြန်လည် ဖြစ်နိုင်ခြေများပါတယ်။ ဆပ်ပြာတုံးတွေမှာ ဘက်တီးရီးယားတွေ ကပ်ပါနေတတ်တာကြောင့် ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနဲ့ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးစင်တာက ဆပ်ပြာတုံးအစား ဆပ်ပြာရည်တွေကို အသုံးပြုဖို့အကြံပေးခဲ့ပါတယ်။ ဆပ်ပြာတုံးတွေကို မျှမသုံးသင့်ပေမယ့် ဆပ်ပြာရည်ဆိုရင်တော့ ရပါတယ်။
၂။ ကိုယ်နံ့ ပျောက်ဆေး
ကိုယ်နံ့ ပျောက်ဆေးတွေဆိုတာ ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေရဲ့ အနံ့ အသက်ဆိုးရွားမှုကို နှိမ်နှင်းပေးတာပါ။ ဒီတော့ ဒီအဏုဇီဝပိုးတွေကိုသတ်ပစ်နိုင်တဲ့ အရာတွေပါဝင်မှာပါ။ ချွေးနံ့ ပျောက်ဆေးတွေဟာ သင့်ရဲ့ ချွေးထွက်မှုကို သာ လျော့နည်းစေပြီး ဒီ ချွေးနံ့ ပျောက်ဆေးတောင့်မှာ ကပ်ပါလာမယ့် ပိုးတွေကို မသတ်နိုင်ပါဘူး။ တစ်ခု ကောင်းတာက ဒီနည်းနဲ့ ရောဂါကူးစက်မှုမဖြစ်နိုင်လောက်ဘူးဆိုပေမယ့် အရေပြားဆဲလ်တွေ၊ အမွှေးအမျှင်တွေ ကပ်နေတတ်ပြီး ဒီပစ္စည်းကို မျှသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ တော်တော် ရွံဖို့ ကောင်းမှာပါ။
အမျိုးသမီးအရေပြားကျန်းမာရေးအစီအစဉ် ရဲ့ ဒါရိုက်တာ၊ အရေပြားအထူးကုသမားတော် Bethanee J.Schlosser ရဲ့ အဆိုအရ မုတ်ဆိတ်ရိတ်ဓားတွေဟာ အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီပိုး၊စီပိုးနဲ့ HIV တို့ ကူးစက်မှု မှာ ပါဝင်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မုတ်ဆိတ်ရိတ်ဓားတွေကို မျှသုံးတာက မှိုရောဂါပိုး ကူးစက်တတ်ကြောင်း သိရှိရပြီး အထူးသဖြင့် ပွေးနာတွေ အဖြစ်များတယ်လို့ သူမက ဆိုပါတယ်။
ညစ်ပတ်နေတဲ့ မျက်နှာသုတ်ပ၀ါတွေ၊ အထူးသဖြင့် စိုစွတ်နေတဲ့ ပ၀ါတွေကို မျှဝေသုံးတာက မျက်စိနာ ရောဂါကနေ ကာလသားရောဂါအထိ ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခါ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဟိုတယ်၊ တည်းခိုခန်းတစ်ခုခုမှာ တည်းပြီဆိုရင် ကိုယ့်ပ၀ါကို ကိုယ်မှတ်ထားပေတော့။
ကိုယ်အမြဲနမ်းနေတဲ့ ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သွားတိုက်တံကို မျှသုံးတာကတော့ တော်တော်ရွံဖို့ကောင်းပါတယ်။ သွေးကတဆင့်ကူးစက်ရောဂါ တွေ ကူးစက်ခံရဖို့ များတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ သွားတိုက်တာဟာ သွေးလမ်းကြောင်းထဲမှာရှိတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေရဲ့ ပမာဏကို မြင့်တက်စေပြီး သွားတိုက်တံမှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ သွေးစသွေးနတွေကဆင့် ကြောက်စရာရောဂါတွေ ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။
လက်သည်းညှပ်တွေကနေ လက်သည်းမှိုစွဲခြင်း အပြင် သွေးကတဆင့်ကူးစက်တတ်တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါပိုးတွေ ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် လက်သည်း၊ခြေသည်းညှပ်နေရင်းနဲ့ အရေပြားကို ညှပ်မိတဲ့အခါမျိုးမှာပေ့ါ။ ဒါကြောင့် သင့်သူငယ်ချင်းက လက်သည်းညှပ်ဌားပါအုန်းလို့ ပြောလာခဲ့ရင် လက်သည်းခြေသည်းညှပ်တဲ့ အလှပြင်ခန်းမဆီ သွားဖို့ အကြံပေးလိုက်ပါ။
အသက်မရှိတဲ့ အရုပ်ပေါင်းများစွာကို သစ်ပင်တွေမှာ ချိတ်ဆွဲထားပါတယ်။ အရုပ်တွေဟာ ဒီနေရာရဲ့ အနှံအပြားမှာ ပုံသဏ္ဏန်မျိုးစုံနဲ့ တိတ်ဆိတ်နေကြပါတယ်။
ဒီနေရာဟာ ရေနစ်ကွယ်လွန်သွားတဲ့ ကလေးမလေး တစ်ယောက်အတွက် မက်ဆီကန် အနုပညာသမားတစ်ယောက် ဖန်တီးထားတဲ့ နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
မက္ကဆီကိုမြို့တောင်ဘက်က တူးမြောင်းတစ်ခုကို မြို့တော်ကောင်စီရဲ့ အလုပ်သမားတွေ ရှင်းရာကနေ အရုပ်ကမ္ဘာလို့ ခေါ်တဲ့ဒီနေရာကို လူအများဟာ သတိထားမိသွားကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
လူတွေနဲ့မရောဘဲ တစ်ယောက်တည်းသွားလာနေတတ်တဲ့ အနုပညာသမား Julian Santana Barrera ဟာ ဒီလက်ရာကို လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော်က ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
တူးမြောင်းထဲမှာ ကလေးမလေးတစ်ယောက်ဟာ ရေနစ် သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုရေနစ်သေဆုံးပြီး ရက်အနည်းငယ်အကြာ တူးမြောင်းထဲကရေပြင်ပေါ်မှာ အရုပ်တစ်ရုပ်ဟာ မျောနေခဲ့ပါတယ်။
တစ်ကိုယ်တည်းသွားလာနေတတ်တဲ့ Barrera ဟာ မျောနေတဲ့ဒီအရုပ်ကို တွေ့သွားရာကနေ ယခုလက်ရာကို ဖန်တီးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေသခံတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရ ဒီအရုပ်ထဲမှာ ကလေးမလေးရဲ့ဝိညာဉ် ပိတ်မိနေတယ်လို့ Barrera က ယုံကြည်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ဒါကြောင့် သူ့ရဲ့ ရေမျောဥယျာဉ်ပေါ်မှာ အရုပ်ကို ချိတ်ဆွဲထားခဲ့ပါတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာ ကလေးမလေးဟာ သူ့ကို လိုက်ခြောက်နေတယ်လို့ပါ ယုံကြည်လာပြီး အရုပ်တွေ အများကြီးထပ်ပေါင်းကာ ကောင်မလေးရဲ့ ဝိညာဉ် နှစ်သက်အောင် လုပ်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
Barrera ဟာ တစ်ကိုယ်တည်း နေတတ်သူဖြစ်ပေမဲ့ ဒီလက်ရာကိုလာကြည့်ဖို့ စိတ်ဝင်စားတဲ့ လူတစ်ချို့ကို ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သေးတယ် လို့ဆိုပါတယ်။
၂၀၀၁ ခုနှစ်မှာတော့ ကလေးမလေး ရေနစ်သေခဲ့တယ်နေရာမှာပဲ Barrera ဟာ ရေထဲကို ပြုတ်ကျ သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။
လောကကမ္ဘာကြီးက တကယ်ကိုမမျှတပါဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်။ တခါတလေမှာ ပျော်ရွှင်စရာတွေ၊ အလှ တရားတွေအများကြီးပေးတတ်သလို တခါတလေမှာလည်း နာကျင်မှု ဒဏ်ရာ၊ ဝေဒနာတွေ၊ ငိုကြွေးရခြင်းတွေအများကြီးကို ပေးတတ်ပါတယ်။ အမြဲတမ်းမပျော်ရွှင်နိုင် ကြသလို အမြဲတမ်းလည်း မငိုကြွေးရပါဘူး။ အခု ဒီမှာ ဖိ လစ်ပိုင်က ယခုလအစော ပိုင်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကြေကွဲဝမ်းနည်းဖွယ်ကောင်းတဲ့ မင်္ဂလာ ဆောင်လေးတစ်ခုအကြောင်း ကိုပြောချင်ပါတယ်။
အသက် ၂၉ နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ ဖိလစ်ပိုင်သတို့သားလောင်းက သူရဲ့ မင်္ဂလာဆောင်ကျင်း ပပြီး နာရီအနည်းငယ်မှာပဲ သူချစ်မြတ်နိုးရတဲ့ မိသားစုကို ခွဲခွာသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ကို သတို့သား ရော်ဒန်ဂိုးရဲ့ အသက် ၃၀ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ရက် ဖြစ်တဲ့ ဇူလိုင်လ ၈ရက်နေ့မှာ ကျင်းပသွားဖို့ရည်ရွယ်ထားပေမဲ့လည်း သူ့ရဲ့ ရောဂါအ ခြေအနေသည်းလွန်းတဲ့အတွက် အခုလို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ကျင်းပခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါ တယ်။
အသည်းကင်ဆာရောဂါ ကျွမ်းနေတဲ့အဆင့်ကိုခံစားနေရတဲ့ သတို့သားဖြစ်သူ ရော် ဒန်ဂိုးနဲ့ သတို့သမီးဖြစ်တဲ့ လီဇယ်မေတို့က သူတို့ရဲ့ အသက် ၂ နှစ်အရွယ်သမီး တစ် ယောက်ရပြီးထိ တိုင်အောင်ပင်အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မင်္ဂလာဆောင်ခဲ့ရခြင်း မရှိခဲ့ပေ။ သူတို့ မိသားစုလေးရဲ့ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ကျင်းပတဲ့ ဒီအခမ်းအနားကို သူတက်ရောက်ကုသနေတဲ့ ဆေးရုံမှာပဲ ပရိတ်သတ်တွေနဲ့ အကျင်းရုံးလေးဆောင် ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။
လီဇယ်က သူမရဲ့ သတို့သားလောင်းအတွက် အလှပဆုံး သတို့သမီးဖြစ်အောင်လို့ အ ဖြူရောင် သတို့သမီး ၀တ်ဆုံလေးကို ၀တ်ကာ အဆင်သင့်ဖြစ်လို့နေပါတယ်။ သမီး က လေးက လည်း ပန်းကြဲသူအဖြစ်နဲ့ပါ။ မိသားစုဝင်တွေ၊ဖာသာကြီး နဲ့ ဆေးရုံဝန် ထမ်းတချို့ကလည်း သူတို့ ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲလေးကို ချီးမြှောက်ပေးဖို့ အသင့်ပါ။ အဲ့ဒီ မင်္ဂလာပွဲလေးမှာ အရေးပါဆုံးဖြစ်တဲ့ သတို့သားလောင်းက ကောက်ရိုးတစ်မျှင်စာ ဆုတ်နိုင်လောက်တဲ့ အားအင်နဲ့ ခွဲခန်းထဲမှာသေမင်းတမန်နဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ အချိန်တွေမှာပေါ့။ သိပ်ကိုကြေကွဲဖို့ကောင်းပါတယ်။
ခွဲစိတ်ခန်းထဲက ထွက်လာပြီးချိန်မှာ အသက်မျော့မျော့လေးသာပါလာတဲ့ သတို့သား ရော်ဒန်ဂိုးကို သတို့သားဝတ်စုံ အဖြူရောင် ၀တ်ဆင်ပေးထားပြီး သူ့ရဲ့ ဆေးရုံကု တင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ပဲ သတို့သမီးနဲ့အတူ ကျမ်းသစ္စာခံယူတယ်။ လက်စွပ်လဲတယ်။ နှုတ်ဆက်အနမ်းချို ချိုတွေပေးတယ်။ အသားရောင်ဖျော့တော့တဲ့ မျက်နှာပေးကနေ ပန်းရောင်သမ်း လောက်ထိအောင်ချိုမြိန်တဲ့ အပြုံးပန်းတွေကို မင်္ဂလာဆောင်ပရိတ် သတ်ကြီးကို ချွေပေးသွားခဲ့ပါတယ်။
အစောပိုင်းကာလကတည်းက ရောဂါကျွမ်းနေတာကြောင့် ဆရာ ၀န်တွေကော မိသားစုဝင်တွေကပါ သူ လူ့လောကထဲက ထွက်ခွာသွားမယ့်အချိန်ကို သာစောင့် ဆိုင်းရမယ်လို့ အသိရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ကာ မင်္ဂလာဆောင်ပြီး သိပ်မကြာခင် အချိန် ကလေးမှာဘဲ သူ့ရဲ့ ၀ိဥာဏ်လိပ်ပြာလေးက အားလုံးကို နှုတ်ဆက် ထွက်ခွာသွား ခဲ့ပါပြီ။ အနားမှာရှိတဲ့ သူတွေအဖို့ကလည်း ရင်ထဲကို စို့နစ်ကြေကွဲတာ ကိုခံစားရမှာ သေချာပါတယ်။ မင်္ဂလာဆောင်အခမ်းအနားပြီးမြောက်သွားတဲ့အထိ အားတင်းထား နိုင်ခဲ့တဲ့ သူ့ကိုကောင်းရာ ဘုံဘ၀ကိုရောက်သွားဖို့အတွက် အားလုံး ဆုတောင်း ပေးကြမှာပါ။
ဒါ့ကြောင်မို့လို လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ တွေနဲ့ ထုံမွှမ်းပြည့်လျှံနေတဲ့ ကျွန်မတို့ လောကကြီးထဲမှာ ကျင်လည်နေကြတဲ့ လူသားတွေက မွေးလာကတည်းက ကြုံလာ ဆုံလာခဲ့ရတဲ့ သူတွေအားလုံးအပေါ် အကောင်းဆုံးတွေကိုပဲ ကြိုးစားဖန်တီးပေး သွားကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ့် အသက်ဝိဥာဏ် မလွင့်ပါးမီမှာ ကိုယ့် ဘ၀တလျှောက် လုံးကောင်းတာတွေကိုပဲလုပ်သွားပေးဖို့နဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်ချစ်ခင်ရတဲ့ သူတွေ အ တွက်လည်း ကိုယ်ဆိုတဲ့ ရပ်တည်မှုတစ်ခုက သူတို့ရဲ့ စိတ်ထဲမှာထင်ကျန်အမှတ်ရ နေမယ်ဆိုရင်လေ………………………….။
ဒူဘိုင်းတွင် ၁၆ နှစ် အရွယ် သမီးအား ပြည့်တန်ဆာအဖြစ် ရောင်းစားခဲ့သော မိဘနှစ်ပါးအား ထောင်ဒဏ်ချမှတ်
မိဘအရင်းဖြစ်လျက် ၁၆ နှစ် အရွယ် ၎င်းတို့သမီးငယ်၏ ကာမကို ရယူရန် DH 16000
ပေးကား ကမ်းလှမ်းလာသည့် စီးပွားရေးသမားတစ်ဦးထံသို့ သမီးငယ်အား အဓမ္မထိုးအပ်
ကာ ပြည့်တန်ဆာအဖြစ် ရောင်းစားခဲ့သည့် ထိုမိဘနှစ်ဦးလုံးကို ထောင်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်သည်။ (DH ~ UAE ငွေကြေး၏ အတိုကောက် အမည်။ 1 DH လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ 0.27 နှင့် ညီမျှသည်။)
ဒူဘိုင်းတရားရုံးမှ အသက် ၃၈ နှစ် အရွယ် ပါကစ္စတန်လူမျိုး ဖခင် K.A. အား ထောင်ဒဏ် ၅ နှစ် နှင့် ၎င်း၏ ၃၅ နှစ် အရွယ် ဇနီး S.K. ကို ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ် အသီးသီး ချမှတ်လိုက်သည်။ ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် သမီးငယ်ကို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အလွဲသုံးစားလုပ်မှု နှင့် သမီးငယ်အား သူစိမ်းယောက်ျားနှင့် လိင်ဆက်ဆံမှုပြုရန် အဓမ္မတွန်းအားပေးမှုများ ကျူးလွန်ခဲ့သည်။
၁၆ နှစ် အရွယ် မိန်းကလေးမှ တရားရုံးတော်၌ မိဘများနှင့် ရင်ဆိုင်တွေ့သောအခါ အော်ဟစ်ငိုကြွေးခဲ့ပြီး ဆင်းရဲတွင်းမှ လွတ်မြောက်ရန်အတွက်ဆိုကာ မိဘနှစ်ပါးမှ သူမ၏ ခန္ဓာကိုယ်ကို DH 16000 နှင့် ရောင်းစားခဲ့ပုံများကို အစစ်ခံထွက်ဆိုခဲ့သည်။
"အဖေက ကျွန်မရဲ့ အပျိုစင်ဘဝကို ရောင်းချခဲ့ပါတယ်... ကျွန်မတို့ မိသားစု ဆင်းရဲတွင်းကလွတ်အောင် ကျွန်မက ကူညီစေချင်တယ် တဲ့... ကျွန်မမလုပ်ချင်ပေမယ့် အဖေ နှင့် အမေက ပြည့်တန်ဆာအလုပ်ကို ဇွတ်တင်း တွန်းအားပေး လုပ်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်.." ဟု ပါကစ္စတန် ဆယ်ကျော်သက် မိန်းကလေးမှ ပြောကြားသည်။
ဥပဒေအရာရှိများက K.A. နှင့် S.K. တို့သည် ၎င်းတို့၏ မိဘဘဝကို တစ်လွဲအသုံးချ၍ လူကုန်ကူးမှု ကျူးလွန်ခြင်း၊ ၎င်းတို့၏ သမီးကို အလိုမတူပါပဲလျက် အဓမ္မ လိင်လုပ်ငန်းအတွင်းသို့ သွတ်သွင်းခြင်းများ ပြုခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
တရားရုံးတော်မှ မိခင်ဖြစ်သူကို ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်မှုဖြင့်လည်း ထောင်ဒဏ် ၆ လ ထပ်မံချမှတ်ခဲ့သည်။
ဇွန် ၂၆၊ ကြာသပတေးနေ့က တရားစီရင်ချက်များတွင် တရားသူကြီးမှ ပါကစ္စတန်လူမျိုးနှစ်ဦးဖြစ်သော အသက် ၄၀ နှစ် အရွယ် A.H. နှင့် အသက် ၁၉ နှစ် အရွယ် M.S. တို့ကို အယ်လ်မန်ခိုရပ်ကွက် မြေညီတိုက်ခန်း၌ ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်း ဖွင့်လှစ်ထားရှိမှုဖြင့် ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ် စီ ချမှတ်ခဲ့သည်။
၎င်းတို့မှ ပြည့်တန်ဆာမြောက်များစွာထံမှ ငွေကြေးအကျိုးအမြတ် ခေါင်းပုံဖြတ်ရယူခဲ့သည့်အပြင် ၎င်းတို့၏ ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်း မြှင့်တင်ရေးအတွက် ဇိမ်မယ်များ၏ ကိုယ်လုံးတီးပုံများ၊ ညစ်ညမ်းပုံများကို အင်တာနက် ဝဘ်ဆိုဒ်များ၌ တင်ရှိခဲ့သဖြင့် အပြစ်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။
ဆယ်ကျော်သက် မိန်းကလေး နှင့် လိင်ဆက်ဆံမှုပြုခဲ့သော ပါကစ္စတန်စီးပွားရေးသမား M.Y. သည်လည်း ထောင်ဒဏ် ၁ နှစ် ကျခံခဲ့ရသည်။
မိန်းကလေးမှ တရားရုံးတော်သို့ ဤသို့ ပြောကြားခဲ့သည်။ "ကျွန်မတို့က ဆင်းရဲပါတယ်... အဖေက ကျွန်မကို ဒူဘိုင်းကို လိုက်လာဖို့ ဇွတ်အတင်း ခေါ်ခဲ့တာ... အဖေက ပြောတယ်... ကျွန်မသာ ပြည့်တန်ဆာလုပ်ရင် ကျွန်မတို့ လျင်လျင်မြန်မြန် ချမ်းသာလာမယ် တဲ့... ကျွန်မက မလုပ်ဘူးလဲ ငြင်းလိုက်ရော အဖေက စိတ်ဆိုးတယ်လေ... ဒါပေမယ့်လည်း ဖိအားတွေက အရမ်းများ၊ တွန်းအားတွေက ပေးလွန်း ဆိုတော့... နောက်ဆုံး ကျွန်မလည်း မတတ်သာပဲ လက်ခံခဲ့ရပါတယ်..."
"မိန်းကလေးရဲ့ ပထမဆုံး ဆက်ဆံခဲ့ရတဲ့ ဖောက်သည်က ဘယ်သူပါလဲ? အဲဒီ ဖောက်သည်က မိန်းကလေးသည် ဥပဒေအရ အရွယ်မရောက်သေးဘူး ဆိုတာက သိပါသလား?" ဟု တရားသူကြီးမှ မိန်းကလေးကို မေးမြန်းသည်။
M.Y. အား လက်ညှိူးထိုး၍ မိန်းကလေးမှ ဤသို့ ဖြေကြားသည်။ "ဒီလူကြီးပါပဲရှင်... ကျွန်မမိဘတွေက ကျွန်မကိုခေါ်ပြီး M.Y. ရှိတဲ့ ဟိုတယ်အခန်းထဲကို ပို့ထားခဲ့တယ်... သူက ကျွန်မကို အဝတ်အစားတွေ ချွတ်ဖို့ ပြောတယ်... ဒါပေမယ့်လို့ ကျွန်မစိတ်တွေ ရှုပ်ထွေးပြီး ငိုမိတယ်... ကျွန်မကို ဒီလိုမလုပ်ဖို့ သူ့ကို ကျွန်မ တောင်းပန်ပါတယ်... သူက ကျွန်မကို ခြိမ်းခြောက်တယ် ရှင့်... သူခိုင်းတဲ့အတိုင်း လုပ်မပေးရင် သူပေးထားတဲ့ DH 16000 ကို အဖေ့ဆီက ပြန်တောင်းမယ် တဲ့... ကျွန်မလည်း ငိုလျက်က ငွေတော့ပြန်မယူဖို့ တောင်းပန်မိပါတယ်... ကျွန်မအဝတ်အစားတွေ တစ်ပိုင်းတစ်စ ချွတ်ပေးလိုက်ပါတယ်... သူက အတင်းအကျပ်လုပ်လာတော့ ကျွန်မ အဖေ့ဆီကို ဖုန်းခေါ်ခွင့် သူ့ဆီကို ခွင့်တောင်းတယ်... ကျွန်မ အဖေ့ဆီကို အကျိုးအကြောင်း ပြောပြတော့ အဖေက နင် M.Y. ကို စိတ်မပျက်စေနဲ့ တဲ့... ဟုတ်ကဲ့... M.Y. က ကျွန်မ အရွယ်မရောက်သေးဘူးဆိုတာ သိပါတယ်... ပြီးတော့ သူ ဒီလို DH 16000 ကို ပေးထားတယ်ဆိုတာ ဒီ ရည်ရွယ်ချက် နှင့် ပေးထားတယ် ဆိုတာကိုလည်း ကျွန်မကို ပြောပြပါတယ်..."
"A.H. နှင့် M.S. တို့က မိုဘိုင်းဖုန်းတွေသုံးပြီး ကျွန်မရဲ့ ပုံတွေ နှင့် မပေါ့်တပေါ်ဝတ်ထားတဲ့ တခြားအမျိုးသမီးတွေရဲ့ ပုံတွေကို ရိုက်ယူ၊ အင်တာနက်ပေါ်တင်ပြီး ဖောက်သည်တွေကို ဆွဲဆောင်ပါတယ်..." ဟု မိန်းကလေးမှ တရားသူကြီးအား ရှင်းပြခဲ့သည်။
ဥပဒေအရာရှိ၏ မှတ်တမ်း၌ ရဲသတင်းပေးတစ်ယောက်မှ ဖောက်သည်တစ်ယောက် အသွင်ယူ လှုပ်ရှားကာ အမှုကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး မိန်းကလေး၏ မိဘနှစ်ပါးကို ပူးပေါင်းစုံစမ်းရေးအဖွဲ့မှ ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး ကျန်တရားခံများကို အချုပ်ချထားသည်ဟု ပါရှိသည်။
ဇွန် ၂၆၊ ကြာသပတေးနေ့က ချမှတ်ခဲ့သော ယင်းစီရင်ချက်များအား ၁၅ ရက်အတွင်း အယူခံပိုင်ခွင့် ရှိသည်။
Credit : shwemyanmarmediagroup
ရခိုင်စာသင်ကြားရေး ထောက်ပံ့ငွေများ ဂွမြို့နယ်တွင် ဖြတ်တောက်ခံရဟုဆို
ရခိုင်ပြည်နယ် ဂွမြို့နယ်တွင် ရခိုင်စာပေ သင်ကြားရေး အတွက် ကျောင်းဆရာများသို့ ထောက်ပံ့ငွေများ ကို သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ် ပညာရေးမှူးရုံးက ဖြတ်တောက်နေသည်ဟု အမည်မဖေါ်လိုသူ ကျောင်းအုပ် ဆရာကြီး တစ်ဦးက နိရဉ္စရာသို့ ပြောကြားသည်။
“ ဒီနေ့ဘဲ ရခိုင်စာ သင်ကြားရေး အတွက် တစ်လကို သုံးသောင်းနုန်းနဲ့(၃) လအတွက် ကျပ်ငွေ ၉၀၀၀၀ စီ ကျောင်းဆရာ တစ်ဦးစီကို ထုတ်ပေးပါတယ်။ အဲသလို ထုတ်ပေးတဲ့ နေရာမှာ ၁၅၀၀၀ ကျပ်ကို မြို့နယ် ပညာရေးမှူးရုံးက ဖြတ်ယူထားပါတယ်” ဟု သူက ဆိုသည်။
၎င်းငွေများမှာ လွန်ခဲ့သော (၃) လအတွက် ထုတ်ပေးသော ငွေဖြစ်သည်ဟု သူက ဆိုသည်။
“ ကျွန်တော်တို့ ဂွမြို့နယ်က ရခိုင်စာသင်ကြားပေးဖို့ ကတိပြုထားတဲ့ ဆရာ- ဆရာမ ၁၂၀ ဦးကို သုံးလစာထုတ်ပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလအတွက်တော့ မပါဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းပိတ်တဲ့ (၃) လ အတွက် ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဆိုသည်။
နိရဉ္စရာမှ ဂွ မြို့နယ် ပညာရေးမှူးရုံးသို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ မြို့နယ် ပညာရေးမှူးက ယခုလို ပြောကြားသည်။
“ ကျွန်တော်တို့ မကြားသေးဘူး။ ငွေထုတ်ပေးဖို့ ပြောထားတဲ့ ရုံးက စာရေး နှစ်ဦးကို မေးကြည့်ပါမယ်။ စစ်တွေက ငွေလွှဲတဲ့အခါ ကုန်ကျတာလေးတွေတော့ နည်းနည်းရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလောက်တော့ မများနိုင်ပါဘူး” ဟု ဆိုသည်။
၎င်းကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး ပြေပြေလည်လည် ဖြေရှင်းပေးသွားမည်ဟု ဆိုသည်။
နွေရာသီ (၃) လတွင် ဂွမြို့နယ်တွင် ဆရာ- ဆရာမများ အနေဖြင့် ရခိုင်စာကို သင်ကြားနိုင်ခြင်း မရှိခဲ့သော်လည်း နိုင်ငံတော်က ရခိုင်စာသင်ကြားရေးအတွက်ဟု ဆိုကာ သုံးလအတွက် ကျပ်ငွေ (၉၀၀၀၀) ကျစီကို ဆရာ ဆရာမ တစ်ဦးစီသို့ ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
အလားတူ ရခိုင်ပြည်နယ် ပေါက်တောမြို့နယ်တွင်လည်း ရခိုင်စာပေ သင်ကြားရေးအတွက် ကျောင်းဆရာများသို့ ထောက်ပံ့ငွေများ ဖြတ်တောက်ခံရမူများ ရှိခဲ့သဖြင့် နိရဉ္စရာသို့ ဆရာများက သတင်းပို့ တိုင်ကြားခဲ့ဖူးသည်။
ခန္ဓာကိုယ်နှစ်ခု ခွဲစိပ်ပြီး သည့် ကလေးငယ် နှလုံး အမြှေးပါး ပေါက် ရောဂါ ဆက်လက် ခွဲစိပ်ရဖွယ်ရှိ
ရင်ညွန့်မှခြေလက်တစုံ အပိုထွက်လာသည့် သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း သီပေါမြို့နယ်မှ ကလေး လေး မှာ ခွဲစိပ်ကုသမှု ခံယူပြီး စီးခဲ့ပြီး ဖြစ်သော်လည်း အဆုတ်ချွဲကပ်သည့် ရောဂါနှင့် နှလုံး အမြှေးပါး ပေါက် နေသည့် ရောဂါကိုပါ ကုသမှု ဆက်လက်ခံ ယူရန် ဆရာဝန်က ပြောဆို လိုက်သည်ဟု ဆိုပါသည်။
“အခု အဆုတ်ကို တရက် ၂ ကြိမ် ဆရာဝန်တွေက လာဆေးပေးတယ်။ အဆုတ်မှာ ချွဲကပ်နေတယ်။ ဒါတော့စိတ်မပူရဘူး။ မှန်မှန်ဆေးပေးရင်မကြာခင် ပျောက်နိုင်တယ် လို့ပြောတယ်။ စိတ်ပူရတာက နှလုံးအမြှေးပါးပေါက်တဲ့ရောဂါပေါ့။ အဲတာကို အဆုတ်သန့်ပြီးနောက်ပိုင်း ခွဲစိပ်ဒဏ်ရာတွေ ပျောက် ကင်း ပြီးနောက်ပိုင်းမှဘဲ ဆက်ကုမယ်လို့ပြောတယ်။ ဆိုတော့ ချင်းမိုင်ဆေးရုံမှာ ထပ်ကြာဦးမယ်ထင် တာဘဲ။” ဟု ဖခင်ဖြစ်သူ စိုင်းလှမြင့်က ပြောသည်။
အသက် ၆ လ အရွယ် အဆိုပါကလေးမှာ လက်ရှိ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကောင်းမွန် နေကြောင်း၊ တာဝန်ကျဆရာဝန်ကြီးများ၏ စောင့်ရှောက်မှုအောက်တွင် အနီးကပ်ပြုစုမှုခံ ယူရကြောင်း၊ နှလုံးအမြှေးပါးရောဂါကြောင့် အောက်ဆီဂျင်ဘူးဖြင့် အသက်ကူရှူပေးနေရသေး သော်လည်း စိတ်ပူဖွယ်ရာမရှိကြောင်း တာဝန်ကျ သူနာပြုဆရာမကြီးက ပြောသည်။
“ကျနော်တို့ကို ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ဆေးကုခွင့်ရအောင် အကြံဉာဏ်ရော လူအားရော ငွေအားရော ကူညီထောက်ပံ့ပေးတဲ့ သျှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP/SSA ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံမှာ သူများစကားနားမလည်တဲ့ကျနော်တို့ကိုအဆင်ပြေအောင် အစစအရာရာ ကူညီပေးတဲ့ သျှမ်းအမျိုးသမီး SWAN ကိုလည်း ကျနော်အထူးဘဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ခွဲစိပ်ကုသမှုစရိတ်အားလုံးကို တာဝန်ယူပေးတဲ့ မဟာရတ်နခွန်းချင်းမိုင် ဆေးရုံကြီးကို အထူးဘဲ ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ ဘာမှ စိတ်မပူရပါဘူးလို့ ရွာမှာကျန်ခဲ့တဲ့သူကို စကားပါးချင်ပါတယ်” ဟု ကလေး၏ဖခင် က သျှမ်းသံတော်ဆင့်အား ပြောပြသည်။
ဦးခေါင်းတလုံးတည်းပါပြီး ပင်မခန္ဓာကိုယ်၏ ရင်ညွန့်မှ ခြေလက်တစုံပိုပါသည့် သီပေါမြို့နယ်မှ ကလေးငယ် ကို ဂျွန်လနောက်ဆုံးပတ် အင်္ဂါနေ့တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့ မဟာရတ်နခွန်းချင်းမိုင် (ဆွန်ဒေါက်)ဆေးရုံက အောင်မြင်စွာခွဲထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့သည်။
Abu Bakr al - Baghdadi ကို ခေါင်းဆောင်တင်
အီရတ်နဲ့ ဆီးရီးယားက ISIS လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ သိမ်းပိုက် ထားတဲ့ နယ်မြေ တွေကို စုစည်းပြီး အစ္စလာမ္မစ် နိုင်ငံ ကြေညာ လိုက်ပြီလို့ ISIS အစ္စလာမ္မစ် စစ်သွေးကြွ အုပ်စုရဲ့ ပြောခွင့်ရ ပုဂ္ဂိုလ်က ဆိုပါတယ်။
အီရတ်နဲ့ မြေထဲ ပင်လယ် အရှေ့ခြမ်း အစ္စလာမ္မစ် နိုင်ငံ အမည် ကနေ 'အစ္စလာမ္မစ် နိုင်ငံ' အဖြစ် အဖွဲ့ နာမည်ကို ပြောင်းလိုက်ကြောင်း လဲ ပြောခွင့်ရ ပုဂ္ဂိုလ်က ဆိုပါတယ်။
အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် Abu Bakr al - Baghdadi ကို မွတ်ဆလင် အားလုံးရဲ့ ခါလစ် ခေါင်းဆောင်ကြီး အဖြစ် ခန့်အပ်တယ် လို့လဲ အင်တာနက်က ကြေညာ ခဲ့ပါတယ်။
တကမ္ဘာ လုံးက မွတ်ဆလင် ဂိုဏ်းတွေ အားလုံးက ခေါင်းဆောင်ကြီး ဆီကို သစ္စာခံကြဖို့လဲ နှိုးဆော် ခဲ့ပါတယ်။
အီရတ်မှာ ISIS တပ်တွေ အသာရ နေချိန်မှာ ခုလို ကြေညာ ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အစ္စလာမ် တရား ဥပဒေ နဲ့ အညီ တင်းတင်းကျပ်ကျပ် အုပ်ချုပ်တဲ့ ခါလီဖိတ် နိုင်ငံ ပြန်တည်ထောင် ဖို့ ဆိုတာက ဂျီဟတ် ဘာသာရေး စစ်ဆင်နွှဲသူ တွေရဲ့ မျှော်မှန်းချက်ကြီး ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကြေညာ ချက်ဟာ အယ်လ်ခိုင်ဒါ အဖွဲ့ ရဲ့ ဗဟို ချုပ်ကိုင်မှုနဲ့ ပင်လယ်ကွေ့ ဒေသက အာရပ် ခေါင်းဆောင် တွေကို တိုက်ရိုက် စိန်ခေါ် လိုက်တာ ဖြစ်တယ်လို့ ကျွမ်းကျင်သူ တွေက သုံးသပ် နေကြပါတယ်။
သွေးအမျိုးအစားကို လိုက်ပြီး လူတွေရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားတွေကို
သွေးအုပ်စု လေးမျိုးထဲက အေသွေးပိုင်ရှင်များရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားများကို
အေသွေးပိုင်ရှင်များရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားကတော့ အောက်ပါအတိုင်းပါ..
စဉ်းစားပေးတယ်ဆိုတာ သိပ်မရှိခဲ့ဘဲ ကိုယ်အတွက်ကိုသာ စဉ်းစားတတ်ကြပါသတဲ့… သူတပါးကို
နောက်ပြောင်ရတာကိုလဲ ကြိုက်နှစ်သက်ပါသတဲ့… ဒါပေမယ့် ကြီးပြင်းလာတာနဲ့
စရိုက်သဘာဝများက တဖြည်းဖြည်း ပြောက်ကွယ်သွားပြီး သူများတကာတွေ အံ့အားသင့်လောက်အောင်
အရွယ်ရောက်လာတဲ့ အခါမှာတော့ ကိုယ်လုပ်ရမည့်
အရာအားလုံးကို တာဝန်သိစွာ လုပ်ကိုင်တတ်သူများ ဖြစ်လာပါတယ်တဲ့… တခါတလေ ပတ်ဝန်းကျင်
အခြေအနေ မကောင်းတဲ့ အခါမှာ စိတ်လေလွင့်တတ်ပါတယ်တဲ့… အသစ်အဆန်းတွေကို
စမ်းသပ်လုပ်ကိုင်တာထက် ကျင့်သားရနေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အေးအေးချမ်းချမ်း
နှစ်သက်သူများ ဖြစ်ကြပါတယ်… အလုပ်တစ်ခုကို လုပ်ပြီဆိုရင်လည်း
အလျင်လိုတာမျိုး မရှိဘဲ အဆင့်လိုက်
အဆင့်လိုက် တဖြည်းဖြည်းချင်း ဖြေရှင်းတတ်တဲ့ စတိုင်လ် ပါ… သပ်သပ်ရပ်ရပ်
အလုပ်တစ်ခုကို ပြီးဆုံးအောင် လုပ်တတ်သူများပါ… နေ့စဉ်နေ့တိုင်း
လုပ်နေတတ်လို့ အသစ်အဆန်းကို မရှိဘူးလို့ အပြောခံရတာကိုလည်း
ခံရတတ်ပါတယ်… ဒါ့အပြင် ဘယ်လို
အခြေအနေမျိုး မဆို ကြိုက်တယ် မကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့ အတွေးဟာ ပြတ်သားလွန်းတာကြောင့်
မာဆတ်ဆတ်နိုင်တယ်… ဘုကြတယ် ဆိုပြီး အပြောခံရတာမျိုးလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်…
အေသွေးပိုင်ရှင်များရဲ့ သူများနဲ့ မတူ ထူးခြားချက်ကတော့ တနေ့တာအတွင်း
ပေါ်ပေါက် ရင်ဆိုင်ရတဲ့ အလုပ်
မှန်သမျှကို စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်တတ်ပေမယ့် စိတ်ရှုတ်လွယ်တဲ့
လူမျိုးတွေပါတဲ့… ကိုယ်နဲ့ ဆက်ဆံနေတဲ့
လူတွေကို နွေးနွေးထွေးထွေး ဆက်ဆံတတ်ပြီး သူတပါကို
တခါတလေမှာတော့ သူများကို မယုံမကြည် ဖြစ်တတ်လို့ ကိုယ့်အကြောင်းတွေကို ဘယ်သူ့ကိုမှ
မပြောဘဲလည်း နေတတ်ပါသတဲ့… ဒီလို မယုံကြည်တတ်တဲ့ သဘောထားကြောင့် လူတွေနဲ့
ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာ ကန့်လန့်ကာ တစ်ချပ်ချထားပြီး ဆက်ဆံတတ်ကြပါတယ်တဲ့… ဒီသဘာဝလေးကတော့
သူတို့ရဲ့ မကောင်းတဲ့ အကျင့်လေး တစ်ခုပါတဲ့… ဘ၀ရဲ့ အနှစ်သာရကို
အားလပ်ရက်ကိုလည်း ခုံမင်တတ်ပါတယ်တဲ့… အားလပ်တဲ့ အခါမှာ လျှောက်လည်ရတာကိုလည်း
နှစ်သက်သလို လျှောက်လည်လို့ ကုန်ကျတဲ့ စရိတ်ကိုလည်း မနှမျောပါဘူးတဲ့…
ကမ္ဘာလေးကို တည်ဆောက်ချင်သူများ ဖြစ်ပါတယ်… အထက်လူကြီးရဲ့
မေ့လို့ မရဘဲ စိတ်ထဲမှာ သိမ်းထားတတ်တာကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှုများရှိနေတတ်ပါတယ်…
ဒေါသထွက်တဲ့အခါမှာလည်း ဒေါသကို ဖော်ပြလေ့မရှိတာကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှု
စိတ်ဖိစီးမှုတွေများနေတာကြောင့် စိတ်ဓါတ်ကျနေရတဲ့ နေရက်တွေလည်း
စိတ်ထဲက မကြေနပ်ချက်လေးတွေကို တခါတလေ ဖော်ပြဘို့ လိုပါတယ်..
အေသွေးပိုင်ရှင် နှင့်လိုက်ဖက်မည့်သူ .
.အရင့်အရင် အပတ်တွေက သွေးအုပ်စုများ အကြောင်း ဖော်ပြပြီးခဲ့လို့ ဒီကနေ့တော့
ဘယ်သွေးအမျိုးအစားဟာ ဘယ်သွေးအမျိုးအစားနဲ့ လိုက်ဖက်ညီသလဲဆိုတာကို ဆက်လက်
ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီနေ့တော့ အေသွေးအတွက် ပေါ့နော်။
အေသွေးယောင်္ကျားနဲ့ အေသွေးမိန်းမရဲ့ လိုက်ဖက်ညီ သဘောတွေ့နိုင်တဲ့
ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဆုံး စတွေ့တဲ့ အခါမှာတော့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် သဘော မတွေ့မှုလေးတွေ
ရှိနေတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် နားလည်မှု
မရလောက်အောင် ရင်းနှီးသွားတတ်ပါတယ်။ အကြိုက်ကလည်း တူသလို သူများတွေအမြင်မှာလည်း
အဆင်ပြေတဲ့ အတွဲလို့ မြင်စေပါတယ်။ အကယ်၍ ချစ်ခင်စုံမက်လို့ လက်ထပ်ချင်တာကို မိဘတွေက
သဘောမတူတာမျိုး ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် တောထဲ တောင်ထဲက ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားပြီး
လက်ထပ်ရဲတဲ့ စိတ်ဓါတ်လည်း ရှိကြပါတယ်။ အေသွေးအချင်းချင်းရဲ့
နှစ်ဦးခြားမှာ ရှိတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုလည်း ကြာရှည် ထိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။
လိုပါတယ်။ တစ်ယောက်ရဲ့ အကြောင်းကို တစ်ယောက်က စပ်စုလွန်းလို့ မကြေနပ်မှုလေးတွေ
ဖြစ်နိုင်လို့ပါပဲ။ အေးသွေးပိုင်ရှင် မိန်းကလေးတွေကတော့ တစ်ခါ
မပြောင်းလဲတတ်တဲ့ စတိုင်လ်မျိုးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို အေသွေးပိုင်ရှင်
သန့်ရှင်းဖြူစင်တဲ့ အချစ်ကို ရမှာ အသေချာပါဘဲ။
အေးသွေးနဲ့ ဘီသွေးတွေ့ပြီဆိုရင်တော့ တစ်ဘက်သတ် အချစ်က ပိုများပါတယ်။ အကယ်၍ အေသွေး
ယောင်္ကျားက ဘီသွေးမိန်းမကို ဇနီးအနေရဲ့ ရထားတယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒီ့ ယောင်္ကျားဟာ အမြဲတမ်း
စိတ်အပူအပင်မရှိဘဲ နေထိုင်သွားလို့ ရပါတယ်။ အကယ်၍ ယောင်္ကျားက
ချစ်ချစ်ခင်ခင် ကြင်ကြင်နာနာနဲ့ ဆက်ဆံတတ်ပြီး အားလုံးကို
ယောင်္ကျားများကို ကြည့်ရင် အမြဲတမ်းလိုလို တွေ့နိုင်တဲ့ အေးစက်တည်ငြိမ်မှု
အမြဲတမ်း ပျာယာခတ်နေတတ်တဲ့ ဘီသွေး မိန်းကလေးများရဲ့ စိတ်ကို
လိုက်ဖက်ညီမှုကတော့ ၂၅%ပဲ ရှိပါတယ်။
အိုသွေးပိုင်ရှင်မိန်းကလေးများရဲ့ ပွင့်လင်းတဲ့ အကျင့်နဲ့
အကျင့်ကို ပေါင်းစပ်လိုက်ရင်တော့ တော်တော်ကို လိုက်ဖက်ညီတဲ့ အတွဲလေး
တခါတလေမှာတော့ အိုသွေးများရင့် ပွင့်လင်းမှု၊ တက်ကြွမှုတွေက အေသွေးများရဲ့ အရောင်ကို
ဖုံးသွားတတ်တဲ့ အခါလည်း ရှိပါတယ်။ အေသွေးများ ပိုပြီး
တခါတလေမှာ အေသွေးပိုင်ရှင်များက အိုသွေးပိုင်ရှင် လက်တွဲဖော်ကို အရမ်း
ထင်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နှစ်ယောက်လုံး အေးစက်နေတာထက်စာရင် ဒီလို အတွဲလေးက ပိုပြီး
အမြဲတမ်း အံ့သြစရာတွေနဲ့ ထူးဆန်းစရာတွေနဲ့ ပြည့်နေတတ်တဲ့
အေသွေးပိုင်ရှင် ယောင်္ကျားလေးများရဲ့ စိတ်ကို ပိုပြီးလွယ်လွယ်နဲ့
အကြောင်းရင်းကတော့ အေဘီသွေးပိုင်ရှင် မိန်းကလေးများရဲ့ အမြင်မှာ အေသွေး
ယုံကြည်စရာကောင်းပြီး သဘောကောင်းတယ်လို့ မြင်နေလို့ပါပဲ။ အေဘီသွေးရဲ့
အေသွေးပိုင်ရှင်များက နားလည် လက်ခံနိုင်တာကြောင့် အချင်းချင်း ရင်းနှီးမှု
တခါတလေမှာတော့ မီးနဲ့ တူတဲ့ အချစ်နဲ့ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ အေဘီသွေးပိုင်ရှင်
အေးဆေးပြီး ပုံမှန်နေတတ်တဲ့ ယောင်္ကျားများထက် ခေတ်ဆန်ပြီး သတ်သတ်ရပ်ရပ်
ရှိတဲ့ ယောင်္ကျားမျိုးကို ပိုပြီး နှစ်သက်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လည်း
ဒီလို အချက်တွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့
အေသွေးပိုင်ရှင်များနဲ့ ပိုပြီး ရင်းနှီးနိုင်တဲ့ အခြေအနေကများတာပါတဲ့။
ဘီသွေးပိုင်ရှင်များကတော့ အရမ်းငယ်စဉ်မှာတော့ သွက်လက်ဖျက်လတ်ပြီး တက်တက်ကြွကြွနဲ့
လှုပ်ရှုားတတ်ပေမယ့် ကျောင်းစတတ်တဲ့ အရွယ်လောက်ကစပြီး ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေနဲ့
လိုက်လျောညီထွေအောင် မနေတတ်ဘဲ လေလွင့်နေတတ်ပြန်ပါသတဲ့… ဒါပေမယ့်
ကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုံကြည်မှုရှိပြီ ဆိုရင်တော့ အားလုံးထက် ပိုပြီး
ရှုံးနိမ့်မှုကို မကြောက်ဘဲ မပြတ်သော ဇွဲလုံ့လနဲ့သာ ဆက်လက်ပြီး
အလုပ်တစ်ခုတည်းမှာဘဲ အာရုံအားလုံးကို နှစ်မြုပ်ထားတတ်တဲ့ စတိုင်လ်
ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေက မပေးခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ သိပ်မကြိုးစားတတ်ကြပါဘူးတဲ့…
ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့
ပုံစံအတိုင်း ဆက်ဆံရတာမျိုးကို မနှစ်သက်ကြပါဘူး… ကိုယ်နဲ့ သိပ်
မခင်လှတဲ့ မိတ်ဆွေတွေနဲ့ အတူရှိတဲ့
အချိန်မှာတော့ ဟန်မပျက် အလိုက်တသင့် နေတတ်ကြသူများလည်း ဖြစ်ပါတယ်…
မျက်နှာခွဲခြားတတ်ပြီးတော့ တခြားသူတွေရဲ့ ရှေ့မှာ လူတတ်လုပ်ရတာမျိုးကိုလည်း
မနှစ်သက်တတ်ကြပါဘူး… ဘီသွေးပိုင်ရှင်များဟာ ပုံစံခွက်ထဲမှာ
လွတ်လွတ်လပ်လပ် သွားလာလှုပ်ရှားရတာကို နှစ်သက်ကြပါတယ်တဲ့… ဒါပေမယ့် သတိပြုစရာ
တစ်ခုကတော့ လွတ်လပ်မှုကိုဘဲ အစဉ် တောင့်တနေခြင်းကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေကို
ဘီသွေးပိုင်ရှင်များရဲ့ သူများနဲ့မတူ တမူထူးခြားနေတာကတော့ လွတ်လပ်စွာ
သူတပါးကို မှီခိုအားကိုနေရတာမျိုးကို မနှစ်သက်ကြပါဘူး…
ဆောင်ရွက်ချင်ကြပါတယ်… အလုပ်တစ်ခုကို လုပ်နေစဉ်မှာတောင်
ဆောင်ရွက်တတ်သူများလည်း ဖြစ်ပါတယ်… စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို သိပ်
အငယ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်မှုကို ခံရတတ်ပေမယ့် လူကြီးတွေဆီကတော့ ဆူပူကြိမ်းမောင်းတာကို
ခံရတတ်ပါတယ်… တခါ ဒေါသထွက်ပြီဆိုရင်လည်း အဖြူအမည်း
ဒေါသပြေတဲ့ အခါမှ အခြေအနေတွေကို ပြန်ရှင်းပြပြီး နားလည်မှုကို ယူတတ်ကြတဲ့
အမှားတစ်ခုကို လုပ်မိတယ် ဆိုရင်လည်း ကိုယ်လုပ်တဲ့ အမှားအတွက်
ဖြစ်ပါတယ်… တနည်းအားဖြင့် အတွင်းစိတ်ထား ပွင့်လင်းသူများ ဖြစ်ကြလို့
မရှိတဲ့ သွေးပိုင်ရှင်များ ဖြစ်ပါတယ်။
ရှက်တတ်တဲ့ မိန်းကလေးမျိုးတွေကို ဘီသွေးယောင်္ကျားလေးများက နှစ်သက်ကြပါတယ်တဲ့။ ဘီသွေး
ယောင်္ကျားလေးများရဲ့ သွက်လက်ဖျတ်လတ်မှုနဲ့ အေသွေးမိန်းကလေးများရဲ့ နူးညံ့မှုကို
ပေါင်းစပ်လိုက်ရင်တော့ အရောင်လင်းလက်တဲ့ ချစ်သူတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့ ပိုပြီး ရင်းနှီးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လိုက်ဖက်မှုကတော့ ၂၀%ပါ။
ဘီသွေးယောင်္ကျားလေးနဲ့ ဘီသွေးမိန်းကလေး တွေ့ကြပြီ ဆိုရင်တော့ အချင်းချင်း
လိုက်ဖက်ပါတယ်တဲ့။ ဒီစုံတွဲကတော့ အချင်းချင်း ပျော်ရွှင်တဲ့
လိုက်ဖက်ညီတဲ့ စုံတွဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ချစ်သူအချင်းချင်း
စကားကြမ်းကြမ်းတွေကို ပြောနေတတ်တဲ့ စုံတွဲတွေကို တွေ့ရင် ဘီသွေးစုံတွဲ
ဘေးမှာရှိနေတဲ့ လူတွေက ဒီစုံတွဲကို ကြည့်ပြီး ရန်ဖြစ်တော့မယ်လို့
ဘီသွေးပိုင်ရှင်များက လွတ်လပ်မှုကို နှစ်သက်ပြီး ကိုယ်လုပ်ချင်တာကို
လုပ်နေတတ်တဲ့ အတွက် ဒီအတွဲ
အဆင်ပြေဘို့ကတော့ တော်တော်ခက်ပါတယ်။ ရန်ဖြစ်ရင်းနဲ့ သံယောစဉ်
စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေ ပေးပြီး ပြီးသွားတတ်တဲ့ အခါတွေလည်း ရှိပါတယ်တဲ့။
တခါတလေတော့ ပြဿနာ အကြီးကြီး ဖြစ်တတ်တဲ့ အတွဲလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပြဿနာ ဖြေရှင်းမှုလည်း
သိပ်မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဘီသွေးယောင်္ကျားလေးများရဲ့ တက်ကြွမှုနဲ့
လှုပ်ရှားမှုကို ပေါင်းစပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းတဲ့
ဒါပေမယ့် အမြဲတမ်း တစ်ခုခုကို စိတ်ပူနေရတတ်ပါတယ်။ ဒီစုံတွဲရဲ့
ပွဲလမ်းသဘင်ကို သွားဘို့ စိတ်လှုပ်ရှားနေသလိုမျိုး အမြဲတမ်း
ဒီစုံတွဲ တွေ့ကြပြီဆိုရင်တော့ ကမ္ဘာမြေကြီး ပေါ်မှာ ရှိတဲ့
ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ အခြေအနေကို ဖန်တီးတတ်ကြပါတယ်။ တစ်ယောက်ကများ အကြံတစ်ခုလောက်
ပေးလိုက်ပြီဆိုရင် နောက်တစ်ယောက်က လက်ဝါးရိုက် လက်ခံတတ်တဲ့ အတွဲလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဆန့်ကျင်ဘက် အဆုံးစွန် နှစ်ခု တွေ့ကြတာပါပဲ။ အချင်းချင်း လုံးဝကို မတူတဲ့ အတွက်
ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေက အဆင်မပြေလောက်ဘူးလို့ ထင်ကြပေမယ့် တကယ်တော့ အရမ်းကို
အဆင်ပြေပြီး အချင်းချင်း နားလည်တတ်တဲ့ အတွဲလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အချင်းချင်း
စွမ်းရည်လည်း မြင့်မားပြီး သူများတွေအမြင်မှာ ကြက်သီးထလောက်အောင်
ဖြစ်ပါတယ်။ မြေအောက်ရထားစီတဲ့အခါမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဘတ်စ် စီးတဲ့အခါမှာပဲ
ဖြစ်ဖြစ် တပူးကပ်ကပ်နဲ့ နေတဲ့
အတွဲတွေက ဒီလို ဘီ-အေဘီသွေးပိုင်ရှင်များ ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ ဘီသွေး
အေဘီသွေးပိုင်ရှင် မိန်းကလေးများနဲ့ အတူတူ ရှိတဲ့အခါမှာ အမြဲတမ်း
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က ကြင်ကြင်နာနာနဲ့ မဆက်ဆံတတ်ပေမယ့် ချစ်သူလုပ်တဲ့ မိန်းကလေးက
ချွဲနွဲ့လိုက်ရင်တော့ ကြင်ကြင်နာနာပြန် ဆက်ဆံတတ်ကြတယ်။ အေဘီသွေးပိုင်ရှင်
အရမ်း ကြင်နာဖွဲ့နွဲ့ လွန်းတဲ့ ယောင်္ကျားများ၊ မနားမနေ စကားပြောတတ်တဲ့
သိပ်မကြိုက်လှပါဘူး။ ကိုယ်တိုင်ကသာ ယောင်္ကျားလုပ်သူကို စကား
တဘက်သားက ပူညံပူညံ လုပ်တာကိုတော့ မကြိုက်ကြပါဘူးတဲ့။ ဒါပေမယ့် ဒီအတွဲက
ဒီတစ်ခါ အိုသွေးပိုင်ရှင်များ အကြောင်း တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်…
အိုသွေးပိုင်ရှင်များကတော့ အိမ်မှာတော့ ပြဿနာရှာတတ်ကြပေမယ့်
သူငယ်ချင်းတွေကို ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်တတ်ပြီး လူတကာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေအောင်
နေတတ်သူများဖြစ်ကြပါတယ်… အရာအားလုံးကို တက်တက်ကြွကြွနဲ့ ပါဝင်ဆောင်ရွက်တတ်သူများ
ဖြစ်ကြပါတယ်… အလုပ်အားလုံးကိုလည်း ကိုယ့်အလုပ်လို့ သတ်မှတ်ပြီး ကြိုးကြိုးစားစား
ဆောင်ရွက်တတ်ကြသူများ ဖြစ်ပါတယ်… လုပ်ငန်းခွင်ကို ရောက်ပြီဆိုရင်လည်း သူတပါးကို
စာနာထောက်ထားတတ်ကြပါသတဲ့… အနာဂတ်အတွက် ရည်မှန်းချက် တစ်ခု ရှိပြီဆိုရင်
လုပ်ကိုင်တတ်ပေမယ့် မျှော်လင့်ချက် မရှိဘူးလို့ ထင်မိပြီဆိုရင်တော့
လက်လျှော့ပစ်တဲ့ အကျင့်လေးများလည်း ရှိပါတယ်တဲ့… အလုပ်တစ်ခုကို
အခြေအနေ အလိုက် စိတ်စုစည်းမှုလည်း ကောင်းမွန်ပါသတဲ့… ရလဒ်ကိုဘဲ
ဆိုနိုင်ပါသတဲ့… အလုပ်တစ်ခုကို လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် plan အရင်ချပြီးမှ
ကိုယ့် စတိုင်လ်နဲ့ကို နေတတ်သူများဖြစ်သလို ကိုယ်ပိုင် အတွေးအခေါ်များကို
ဖြစ်ပါတယ်… ဒီလို စရိုက်တွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူတွေ ဖြစ်တာမို့
အောင်မြင်နိုင်တဲ့သူများ ဖြစ်ပါတယ်တဲ့…. ဒါပေမယ့် ကိုယ်ရဲ့
ယုံကြည်မှု ပြင်းထန်ချင်းက တခြားသူများရဲ့ ယုံကြည်မှုကို လစ်လျှူရှုသလို
အပန်းဖြေတာတို့ ၀ါသနာကို အကောင်အထည် ဖော်တာတို့ကိုတော့ သိပ်မနှစ်သက်လှပါဘူး…
အိုသွေးပိုင်ရှင်များက လက်တွေ့ကျကျ လုပ်ကိုင်ရတာကို နှစ်သက်ကြသူများလည်း
တခါတလေမှာတော့ Romantic ဆန်တာလေးတွေကိုလည်း ကြိုက်နှစ်သက်ကြပါတယ်တဲ့…
အိုသွေးပိုင်ရှင်များရဲ့ ထူးခြားချက်ကတော့ ကိုယ့်အတွက် အရေးကြီးတဲ့
သည်းခံတတ်ပေမယ့် ရေရှည်တော့ သည်းမခံနိုင်ပါဘူးတဲ့… လူတွေနဲ့ ဆက်ဆံတဲ့
အခါမှာ ယုံကြည်မှု ရှိရှိနဲ့
ဆက်ဆံတတ်ပြီး ကိုယ့်ထက် အားနည်းသူနဲ့ ဆက်ဆံတဲ့ အခါမှာတော့ နွေးနွေးထွေးထွေး သဘောထား
ကြီးကြီးနဲ့ ဆက်ဆံတတ် ကြပါသတဲ့… ပြိုင်ချင်တဲ့ စိတ်ဓာတ် ပြင်းထန်လို့
စိတ်ဆင်းရဲရတာမျိုးလည်း ရှိပါတယ်… အိုသွေးပိုင်ရှင်များက တခါတလေမှာ စကားနည်းပြီး
အေးအေးဆေးဆေး တစ်ယောက်တည်း တွေးခေါ်နေရတာကို ကြိုက်နှစ်သက်ကြပါသတဲ့…
တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ စိတ်ကသိကအောင့် ဖြစ်တဲ့ အခါတိုင်း စိတ်ထဲမှာ စုမထားဘဲ တဘက်သားကို
ပြတ်ပြတ်သားသား ပြောတတ်ပါသတဲ့… ဒါပေမယ့် အားလုံး ပြီးသွားတဲ့ အခါမှာတော့ ဒါတွေ ငါ
ဘယ်တုန်းက လုပ်ခဲ့လို့လဲ ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုး အားလုံးကို မေ့ပြီးနေနိုင်သူများပါ…
မိန်းကလေးများရဲ့ အလေးနက်ထားတတ်တဲ့ အကျင့်တွေကို ပေါင်းစပ်လိုက်ရင်တော့
ဖြစ်စေပါတယ်။ အေသွေးပိုင်ရှင်မိန်းကလေးများကတော့ အိုသွေးပိုင်ရှင်
အေးမြစေချင်ကြပါတယ်တဲ့။ အမြဲတမ်း ကံကောင်းမှုကို ဖြစ်စေပါတယ်တဲ့။
အကျိုးရှိစေမယ့် စကားများကို ဖလှယ်ရင်းနဲ့ ခင်မင်မှုကို ပိုမို
နောက်ပြောင်ပြောဆိုတဲ့ အခါမှာလည်း အပြန်အလှန် ဖလှယ်နိုင်တာကြောင့် လိုက်ဖက်ညီတဲ့
ကြင်ကြင်နာနာ ဆက်ဆံချင်ပေမယ့် လုပ်လိုက်တဲ့ အလုပ်တိုင်းကတော့
မိန်းကလေးဘက်ကတော့ သင့်ကို ကောင်းကောင်း ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့
ယုံကြည်နေတတ်ပါတယ်။ ဒီအချက်ကို သတိထားပြီး သူမကို ဆွဲဆောင်ပါတဲ့။ ဒီလိုသာ
စိတ်ဓါတ်တွေအားလုံးကြောင့် အချင်းချင်း သစ္စာဖောက်တာမျိုး လုံးဝမရှိပါဘူး။ တကယ်တော့
အိုသွေးပိုင်ရှင်ယောင်္ကျားလေးများက ကလေးဆန်ပြီး ချွဲတတ်တဲ့
အိုသွေးမိန်းကလေးများကလည်း ကြင်နာပြီး နွေးထွေးတဲ့ ယောင်္ကျားမျိုးကို
ဒီအချက်မှာတော့ နည်းနည်း အဆင်မသင့်တာမျိုးတော့ ရှိတတ်ပါတယ်။
အချင်းချင်း အရမ်းကို လိုက်ဖက်ညီတယ်လို့ ထင်ရပါတယ်။ သာမန် ယောင်္ကျားလေးနဲ့
မပြောနိုင်လောက်တဲ့ အကြောင်းတွေကိုတောင် ပြောနိုင်လောက်အောင်
ယောင်္ကျားမိန်းမရယ်လို့ မတွေးပဲ သူငယ်ချင်းအနေနဲ့ ဆက်ဆံတတ်ကြပါတယ်။
တွေ့ရင် ဒီတိုင်းမသွားနိုင်ပါဘူး။ စိတ်ထားကောင်းတယ်လို့
ဆိုလိုလို့ရပါတယ်။ အိုသွေးအချင်းချင်း အားလုံး
အိုကေမှာပဲလို့ ထင်နိုင်ကြပေမယ့် တကယ်တော့ အဲဒီလို မဟုတ်ပါဘူး။
လိုက်ဖက်မှု ရာခိုင်နှုန်းက ၄၀%ပါ။
အကျင့်လေးတွေကြောင့် စိတ်အခန့်မသင့်တာလေးတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ ရန်ဖြစ်ရာကနေ
ဒါပေမယ့် လိုက်ဖက်ညီမယ့် ရာခိုင်နှုန်းကတော့ ၉၅% ပါ။
အေဘီသွေးပိုင်ရှင်များရဲ့ ထူးခြားချက်ကတော့ ဒီလို ဖြစ်ပါတယ်…
မထူးခြားလှတဲ့ စရိုက်သဘာဝကို ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်တဲ့…
မိဘကို ဆိုးတာမျိုးလည်း မရှိတဲ့ အေဘီသွေးပိုင်ရှင်များက အရာအားလုံးကို
အဆူခံရတာမျိုးလည်း လုံးဝ မရှိသလောက်ပါတဲ့… ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ
လျင်လျင်မြန်မြန် အကဲခတ်နိုင်စွမ်းရှိသူများလည်း ဖြစ်ပါတယ်…
ဒါကြောင့်မို့ ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေက
အေဘီသွေးပိုင်ရှင်များကို စကားနည်းပြီး ဘုကျကျနိုင်လိုက်တာလို့ အပြောခံရတာမျိုးလည်း
ကြုံရတတ်ပါတယ်… ဒါပေမယ့် ကြီးပြင်းလာတာနဲ့ အမျှ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့
နေတတ်လာပြီး လူမှုဆက်ဆံရေးလည်း ကောင်းမွန်ပြေပြစ်လာပါတယ်တဲ့… အစပိုင်းမှာတော့
အလုပ်တစ်ခုကို ကြာရှည်လုပ်နိုင်တဲ့ ဇွဲ နည်းပါးတာကြောင့် အလုပ်တစ်ခုကို
လုပ်တဲ့ အခါမှာ မြန်မြန်
ပင်ပန်းအားလျော့ လွယ်ပါတယ်တဲ့… ဒါပေမယ့်လည်း ၀ီရိယစိုက်ပြီး
ကြိုးစားနေတဲ့ ကိုယ်ကိုတိုင်ရဲ့ ပုံစံကို
နှစ်သက်သူများ ဖြစ်လို့ ဘယ်အရာကိုမဆို လုပ်လိုစိတ် ပြင်းထန်ပြီး
လုပ်ဆောင်တတ်ပါတယ်တဲ့… လူတွေနဲ့ ဆက်ဆံတဲ့ အခါမှာလည်း အပြောအဆိုကို အတတ်နိုင်ဆုံး
သတိထားတတ်ပြီး လုပ်ငန်းခွင်မှဆိုရင်လည်း အမှားမလုပ်မိအောင် သတိထား
ဖြစ်ပါတယ်… လူတစ်ယောက်နဲ့ တော်တော်လေး ရင်းနှီးလာတာတောင်မှ အဲဒီလူနဲ့
အတားအဆီး တစ်ခုကို ထားပြီးဆက်ဆံတတ်သူများလည်းဖြစ်ပါတယ်… ဒါကတော့ သူတပါးအပေါ်မှာ
အမှားလုပ်မိမှာကို စိုးရိမ်တတ်တဲ့ အေဘီသွေးပိုင်ရှင်များရဲ့
ဖြစ်ပါတယ်… ဒါ့ပြင် အေဘီသွေးပိုင်ရှင်များဟာ တစ်ယောက်တည်းကိုဘဲ ခင်တတ်တဲ့
အကျင့်လည်းမရှိပါဘူးတဲ့… အလုပ်အများကြီးကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း
အရာအားလုံးကို လက်တွေ့ကျကျ တွေးခေါ်ဆင်ချင်တတ်သူများလည်း ဖြစ်ပါတယ်… အလုပ်တစ်ခုကို
လုပ်တဲ့အခါမှာလည်း ထောင့်ပေါင်းစုံကနေ တွေးခေါ်ဆင်ချင်တတ်သူများ
သူငယ်ချင်းရယ်ဆိုပြီး သီးသန့် မခွဲခြားတတ်ဘဲ လူသားအားလုံးကို တန်းတူညီတူ
ဖြစ်ပါတယ်… ဒါပေမယ့် တဘက်မှာလည်း အမြဲတမ်း ငွေရေးကြေးရေးကို စိတ်ပူနေတာကြောင့်
ပိုက်ဆံရှာနိုင်မယ့် အခြေအနေများကို အပူတပြင်း ရှာဖွေနေတတ်ပါတယ်တဲ့…
ကိုယ့်ရဲ့ ခံစားချက်ကို မျက်နှာမှာ မဖော်ပြတတ်သူများ ဖြစ်သလို
မထွက်တတ်ပါဘူးတဲ့… ကိုယ့်ကို သစ္စာဖောက်သွားတဲ့သူကိုတော့ သေချာ
စရိုက်သဘာဝကို ပိုင်ဆိုင်သူများ ဖြစ်ပါတယ်… တခါတလေတော့ နူးညံ့တဲ့
အေဘီသွေးပိုင်ရှင်များရဲ့ မျက်နှာမှာ မြင်နိုင်သလို တခါတလေမှာတော့ ခက်ထန်မှုတွေကိုသာ
မြင်ရတတ်ပါတယ်…. ဒါတွေအားလုံးကတော့ အေဘီသွေးပိုင်ရှင်များ အကြောင်းသာ
အေဘီ သွေးပိုင်ရှင် နှင့်လိုက်ဖက်မည့်သူ
ဒီနှစ်ယောက်သာ တွေ့ကြပြီဆိုရင်တော့ ပတ်ဝန်းကျင်ကြီး တစ်ခုလုံးဟာ
စကားတွေအများကြီး လိုအပ်တယ်လို့ ထင်ရပြီး အချင်းချင်း အပြိုင် ခေါင်းမာနေတတ်လို့
စိတ်အခန့်မသင့်မှုလေးတွေလည်း များတတ်ပါတယ်။ အေဘီသွေးပိုင်ရှင်
နားမလည် နိုင်တာကြောင့် စိတ်ပင်ပန်းရတဲ့ အတွဲလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မေးတာကတခြား
ဖြစ်တဲ့ အခါတွေလည်း များပါတယ်။ ဒီစုံတွဲလေးက ပြီးပြည့်စုံတဲ့ အတွဲလေးလို့
ပြောလို့ မရနိုင်သလို လုံးဝ
ပေါင်းစပ်လို့မရဘူးလို့လည်း ပြောလို့ မရပါဘူး။ အေသွေး မိန်းကလေးနဲ့
အေဘီသွေးယောင်္ကျားလေးတွေကတော့ နှစ်ဦးနှစ်ဘက်လုံးက သေချာပိရိတဲ့အပြင် အချင်းချင်းရဲ့
အားသာချက်လေးတွေကိုလည်း လက်ခံအသိအမှတ်ပြုတတ်ကြတာမို့ အဆင်ပြေတဲ့ အခြေအနေလေးကို
ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ အေသွေးမိန်းကလေးတွေက စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ စကား၊ ဟာသလေးတွေ
ပြောတတ်တဲ့ ယောင်္ကျားမျိုးကို သဘောကျတတ်ကြပါတယ်။
အေဘီသွေးယောင်္ကျားလေးများရဲ့ ပညာရှိရှိပြုမူတတ်တဲ့ အကျင့်လေးတွေက
ဆွဲဆောင်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ အေဘီသွေးယောင်္ကျားလေးများကလည်း ဘီသွေးမိန်းကလေးများရဲ့
စမ်းသပ်လုပ်ကိုင်ချင်စိတ်၊ တက်ကြွဖျတ်လတ်မှုကို နှစ်သက်ကြပါတယ်တဲ့။
အေဘီသွေးယောင်္ကျားလေးများ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့ ချစ်ခွင့်ပန်တဲ့
ပုံစံမျိုးကို သဘောကြသလို ညင်းလည်း
မညင်းနိုင်ပါဘူး။ ပွင်းလင်းတဲ့ စတိုင်လ်ကို လိုလားတာဟာ ဘီသွေးတွေရဲ့
ယောင်္ကျားလေးဘက်ကတော့ နည်းနည်း တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့ အခါလေးတွေလည်း ရှိတတ်ကြပြီး
ရင်ထဲမှာ ခံစားရတဲ့အတိုင်း ဖော်ပြတတ်ပေမယ့် ဘီသွေးမိန်းကလေးများရဲ့
အချင်းချင်း လုံးဝ စရိုက်သဘာဝကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာတောင်မှ တော်တော်
ဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်သူအဖြစ်အနေထက် အစ်ကိုတစ်ယောက်လို ခင်မင်တွယ်တာတာမျိုးက
အေဘီသွေး ယောင်္ကျားလေးများရဲ့ ပွင့်လင်းတဲ့ စရိုက်ဟာ
တော်တော် ဆွဲဆောင်မှုရှိနေတတ်ပါတယ်တဲ့။ အေးစက်ပြီး တရားကျကျ စဉ်းစားတတ်တဲ့
ယောင်္ကျားလေးများကို အိုသွေးမိန်းကလေးများက တောင့်တင်းခိုင်မာတဲ့
ထင်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ လိုက်ဖက်ညီမှုကတော့ ၃၀%ပါ။
အချင်းချင်း ကောင်းကောင်းနားလည်နိုင်တဲ့အပြင် တဘက်သားကိုလည်း
အလေးအနက်ထားတတ်ကြပါတယ်။ အဆင်ပြေတဲ့ အတွဲလေးတစ်တွဲဖြစ်ပေမယ့် သူများတွေအမြင်မှာတော့
သိပ်ပြီး မထူးခြားလှတဲ့ အတွဲလေး တစ်တွဲပါ။ တပူးကပ်ကပ်နေတတ်တဲ့
နှစ်ယောက်စလုံးက စဉ်းစားဥာဏ်ရှိတဲ့အတွက် တဘက်သားရဲ့ စရိုက်သဘာဝတွေအားလုံးကို
နားလည်ပေးနိုင်သလို မကြိုက်တဲ့ အပြုအမူကို ရှောင်ကျဉ်ကြပါတယ်။ တခါတလေမှာတော့
အတွေးအခေါ်တွေ မတိုက်ဆိုင်တဲ့အခါလေးတွေလည်းရှိပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်
အပေးအယူမျှတဲ့ အတွဲဖြစ်တာကြောင့် ပျော်စရာကောင်းတဲ့ အတွဲလေးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ… ဒီလောက်ဆိုရင် သွေးပိုင်ရှင်တွေရဲ့ စရိုက်လေးတွေကို
သိကြပြီပေါ့နော်။ သူငယ်ချင်းတို့လည်း ကိုယ်ရဲ့သွေးအမျိုးအစားနဲ့
ဖူးစာရှင်ကို ရွေးချယ်နိုင်ပါစေ။ ဟုတ်သော်ရှိ, မဟုတ်သော်ရှိ အများသူငါ
ဖတ်ရှုဖို့ သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ အပေါင်းအသင်းများကို မျှဝေပေးစေချင်ပါတယ်။
ချစ်သူတိုင်း, ချစ်သူတိုင်း” ချစ်တိုင်း ညား၍ ညားတိုင်း
အလုပ်သမားသေဆုံးမှု မြန်မာယန်စီက နစ်နာကြေး မပေးသေးဟု ကာယကံရှင်ပြော
မုံရွာဒေသ မြန်မာယန်စီ ကြေးနီသတ္တု တူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းမှ လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဖို့ မလုပ်ဆောင်တာကြောင့် အလုပ်သမားတဦး သေဆုံးခဲ့ပေမယ့် ကုမ္ပဏီက နစ်နာကြေးပေးခြင်းမရှိပါဘူး။
မြန်မာယန်စီကုမ္ပဏီရဲ့ လုပ်ငန်းခွင်မှာ လုပ်သက် ၁၀ နှစ် ကျော် အလုပ်သမားကို တန် ၁၀၀ မြေသည်ယာဉ်နဲ့ ကြိတ်မိခဲ့ပေမယ့် အဲဒီကုမ္ပဏီ ကနေ သေဆုံးသူအတွက် နစ် နာကြေး ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း မရှိဘူးလို့ ကာယကံရှင်ဇနီးက ပြောပါတယ်။
မုံရွာဒေသ မြန်မာယန်စီ ကြေးနီသတ္တုတူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီမှာ ယန္တရားစက်ပြင်ရာထူးနဲ့ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ဦးမင်းမင်းစိုးဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ မေ ၁၇ ရက်မှာ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေစဉ် တန် ၁၀၀ မြေသယ်ယာဉ် တက်ကြိတ်လို့ လုပ်ငန်းခွင်မှာပဲ သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး မြန်မာယန်စီ ကြေးနီကုမ္ပဏီအနေနဲ့ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း အန္တရာယ်ကင်းအောင် လိုအပ်ချက်တွေ ရှိနေကြောင်း၊ အခုအလုပ်သမား သေဆုံးတဲ့အပေါ် တာဝန်ယူမူ မရှိတာကြောင့် အမ်တီယူအက်ဖ်အနေနဲ့ တရုတ်ကောင်စစ်ဝန်ရုံးကို သွားရောက်ပြီး အချက် ၄ ချက် တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ ကာယကံရှင်မိသားစုရဲ့ အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ အလုပ်သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် (အမ်တီယူအက်ဖ်) ဗဟိုအကြံပေး ဦးရန်နိုင်ထွေးက ပြောပါတယ်။
“ကျနော်တို့ တရုတ်ကောင်စစ်ဝန်ရုံးကို ဇွန် ၁၉ ရက်နေ့က သွားတယ်။ တရုတ်ကောင်စစ်ဝန်နဲ့တွေ့တဲ့အချိန် ကျနော်ပြောခဲ့တာက မြန်မာယန်စီကြေးနီထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီဟာ လုပ်ငန်းခွင့်အသက်အန္တရာယ် လုံခြုံမှုဆိုင်ရာ လပ်ငန်းစဉ်တွေကို တခုမှ မလုပ်ထားဘူး၊ အချက်လေးချက် ပျက်ကွက်နေတယ်။ နံပါတ် ၁ က ကျွမ်းကျင်ယာဉ်မောင်းတွေကို ခန့်တာမဟုတ်ဘဲ ခခွေးလိုင်စင်လောက်ပဲ ရထားတဲ့ သူတွေကို လစာနည်းနည်းပဲ ပေးပြီးခိုင်တယ်၊ ဒီအတွက် အသက်အန္တရာယ် လုပ်ခြုံမှုမရှိဘူး။ ဒုတိယက ယန္တရားအင်အား အပြည့်အ၀မသုံးဘဲနဲ့ တောင်ကြီးတခုလုံးကို ဖြိုတဲ့အတွက် ယန္တရားမလုံလောက်ဘူး၊ ငွေကြေးအကုန်အကျ သက်သာအောင် လုပ်ထားလို့ လုပ်သားတွေ အခေါက်အရေ များများမောင်းရတဲ့အတွက် ကိုယ့်အသက်အန္တရာယ်ကို မကြည့်နိုင်ဘဲ လုပ်ငန်းပြီးစီးရေးကို ကြည့်ရလို့ အသက်အန္တရယ်တွေ တိုက်ရိုက်ထိခိုက်လာတယ်။ တတိယက ယန်စီကုမ္ပဏီမှာရှိတဲ့ ယန္တရားကြီးတွေ လည်ပတ်တဲ့အခါမှာ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းတဲ့အချက်ပြတဲ့စနစ်တွေ မထူထောင်ထားဘူး၊ ကားတွေက မောင်းချင်သလိုမောင်းတယ်၊ တချို့နေရာတွေမှာ ကားလာတာကို ယာဉ်မောင်းခန်းကနေ မမြင်ရတာရှိတယ်။ နောက်ပြီး မော်တော်ယာဉ်တွေအားလုံးဟာ ကြံ့ခိုင်မှုမရှိဘူး။ နောက်ဆုံးအချက်က ဒီကုမ္ပဏီမှာ သုံးနေတဲ့ယန္တရားတွေထဲမှာ ဒီကုမ္ပဏီဟာ နိုင်ငံတော်ကို အခွန်ဆောင်ပြီး သွင်းထားတဲ့ကားတွေမရှိဘူး။ black ကားတွေဖြစ်တယ်။ ဒီလေးချက်ကို တရုတ်ကောင်စစ်ဝန်ကို ပြောပြတယ်။”
၂ ရက်အတွင်း ပြန်လည်အကြောင်းပြန်မယ်လို့ တရုတ်ကောင်စစ်ဝန်က ပြောပေမယ့် လုံးဝမဆက်သွယ်သေးဘူးလို့ ဦးရန်နိုင်ထွေးက ပြောပါတယ်။
“၁၉ ရက်နေ့ကစတွက်ရင် ဒီနေ့အချိန်ထိ တရုတ်ကောင်စစ်ဝန်ကသော်လည်းကောင်း၊ တရုတ်သံရုံးကသော်လည်းကောင်း ကျနော့်ကို လုံးဝ ဆက်သွယ်တာ မရှိသေးဘူး။ ကာယကံရှင် မိသားစုဘက်ကိုလည်း ဆက်သွယ်တာ မရှိသေးဘူး။ ကုမ္ပဏီဘက်ကလည်း မရှိသေးဘူး၊ ဟိုတနေ့ကတော့ သတင်းမီဒီယာမှာ အစလေးပါလာလို့ သူတို့ဘက်က မျက်ကလဲဆန်ပြာနဲ့ အစည်းအဝေးလာပါဆိုပြီး အတင်းဖိတ်စာနဲ့ လာပို့တယ်။ သို့သော် သူတို့က ညှိနှိုင်းဆေးနွေးချင်တာမဟုတ်ဘူး။ လူမှုဖူလုံရေးကနေပြီး နိုင်ငံတော်နဲ့အစိုးရ၊ အလုပ်ရှင် သူတို့တွေက ပုံမှန်အားဖြင့် အလုပ်သမားကို ပြန်ဖြည့်ဆည်းပေးရမယ့် လူမှုဖူလုံရေးကြေး ပေးတာကို ကုမ္ပဏီဘက်က ပေးလာတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးရယ်၊ သတင်းအမှားလွှင့်ချင်တာရယ်။ ဒီကာယကံရှင်မိသားစုက သန်း ၇၀၀ တောင်းတယ်၊ လိုက်ကူပြီး လုပ်ပေးနေတဲ့အဖွဲ့တွေက ဒီလောက်ကြီးတောင်းရလားဆိုပြီး သတင်းအမှားတွေလွှင့်ချင်တာကို ပြောပြချင်လို့ အစည်းအဝေးကို ခေါ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ အဲဒီအသံတွေထွက်လာလို့ ကျနော်တို့ အစည်းအဝေးကို မတက်ဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီနေ့အထိ ကျနော်တို့ကို ဆက်သွယ်တာ မရှိသေးဘူး။”
သေဆုံးသူ ဦးမင်းမင်းစိုးဟာ မြန်မာယန်စီကုမ္ပဏီမှာ အလုပ်လုပ်စဉ် ကာလပတ်လုံး ပြစ်မှုတစုံတရာ ကျူးလွန်ထားခြင်း မရှိဘူးလို့ သိရပါတယ်။
ဦးမင်းမင်းစိုးရဲ့ဇနီး ဒေါ်မြသန်းဌေးက ခင်ပွန်းလစာ ၁ လ ဒေါ်လာ ၂၆၀ ရလို့ ခင်ပွန်း နှစ်အစိတ်လောက် အသက်ရှင်ပါက ယင်းကာလတန်ဖိုးကို တွက်ချက်ပြီး ကုမ္ပဏီက နစ်နာကြေးအနေနဲ့ တွက်ပြီးပေးရမယ်လို့ ပြောဆိုဖူးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အခု လူမူဖူလုံရေးကနေ ကျပ်သိန်း ၈၀ ကျော် ပေးပေမယ့် ကုမ္ပဏီဘက်ကနေ တစုံတရာ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမရှိပါက မြန်မာယန်စီကို တရားစွဲဆိုသွားမယ်လို့ ဒေါ်မြသန်းဌေးက ပြောပါတယ်။
“နောက်နောင်မှာ ကျမကတော့ ဘယ်လိုအခြေအနေပဲဖြစ်ဖြစ် အဆိုးရွားဆုံး အခြေအနေတခုကိုလည်း ကျမ လက်ခံနိုင်တယ်။ နောက်တော့မဆုတ်ဘူး၊ ရှေ့ကိုပဲ ဆက်သွားဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်။”
မန္တလေးတွင်ပုဒ်မ ၄၃၆ ပြင်ဆင်ရေး လက်မှတ်ကောက်ယူရာ၌ ဥပဒေများနှင့်ငြိစွန်းသည်ဆိုပြီး သတိပေးခံရ
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး တွင် ပုဒ်မ ၄၃၆ ပြင်ဆင်ရန် လက်မှတ်များကောက်ယူရာ၌ သတ် မှတ်ဥပဒေများနှင့်ငြိစွန်းနေသည် ဟုဆိုကာတိုင်းဒေသကြီးအမျိုး သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့
ချုပ်နှင့် ၈၈ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းများအားအစိုးရအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူများက သတိပေးစကား ပြောကြားခဲ့ ကြောင်းသတင်းရရှိသည်။
ပါတီရုံးခန်း ဖွင့်ပြီးမှသာ လက်မှတ်ထိုးကောက်ခံရန်၊ မိမိ ဆန္ဒဖြင့်သာ လက်မှတ်ရေးထိုးစေ ရန်၊ နေအိမ်များအထိ လိုက်လံ ကောက်ယူမှုများမပြုလုပ်ရန်အစ ရှိသည့်အချက်များကို အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အင်န်အယ်လ်ဒီ(ဗဟို)က ထုတ်ပြန်ထားသည်။ သို့သော်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် ပုဒ်မ ၄၃၆ ပြင်ဆင်ရန်လက် မှတ်ကောက်ခံရာ၌ ယင်းညွှန် ကြားချက်များကို လိုက်နာမှုမရှိသည့်အပြင် စည်ပင်သာယာဥပဒေ၊ လမ်းမကြီးများနှင့်ဆိုင် သောအက်ဥပဒေ၊ ကျေးရွာအုပ် ချုပ်ရေးမှူးအက်၊ အသံချဲ့စက်အက် အစရှိသည့် ဥပဒေများနှင့်ငြိစွန်းနေသည့်အတွက် နောင် တွင် ယင်းကဲ့သို့မဖြစ်စေရန် ဇွန်လ ၂၈ ရက်က တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံး၌ ခေါ်ယူသတိ ပေးခဲ့ကြောင်း အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ခဲ့သူ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အင်န် အယ်လ်ဒီပါတီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါ်ဝင်းမြမြကပြောသည်။
‘‘ဥပဒေကို တန်းစီပြီးရွတ်ပြ ခဲ့တာပဲ။ အဲဒီဥပဒေတွေကိုချိုး ဖောက်နေတယ်ဆိုတာ ကိုယ့် ကိုယ်ကိုယ်မသိရင်လည်း အခုသိ သွားနိုင်ဖို့၊ ပြီးရင်ဆင်ခြင်ဖို့၊ ထပ် လုပ်ရင်အရေးယူမယ်ပြောတယ်။ သတိပေးစကားပြောတယ်ဆိုပြီး ခေါ်ပြောတာပါပဲ’’ဟု ဒေါ်ဝင်းမြမြ ကပြောသည်။
မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး အတွင်းတွင် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၄၃၆ ပြင်ဆင် ရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူလက်မှတ်ရေးထိုးသည့်အစီအစဉ် မှာ အောင်မြင်နေသည့်အတွက် အစိုးရတာဝန်ရှိသူများဘက်မှ စိုး ရိမ်ကာ ယခုကဲ့သို့လိုက်လံဟန့် တားနေခြင်းဖြစ်သည်ဟု ယူဆ ကြောင်း၊ တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း မှ မြို့နယ်တစ်မြို့နယ်စီတွင်ရှိနေ သည့် ဆန္ဒမဲပေးနိုင်သူစုစုပေါင်း၏ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း အကြား လက်မှတ်ရေးထိုးထား ကြကြောင်း တိုင်းဒေသကြီး အင်န်အယ်လ်ဒီပါတီ အတွင်း ရေးမှူးဦးတင်ကိုကိုကပြောသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့တက် ရောက်ခဲ့သည့် တိုင်းဒေသကြီး အင်န်အယ်လ်ဒီပါတီနှင့် ၈၈ ပွင့် လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းမှ တာဝန်ရှိ သူငါးဦးစီကို အစိုးရအဖွဲ့မှ လုံခြုံ ရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးအောင်ကျော်မိုးက နံနက် ၉ နာရီမှ ၁၀ နာရီခန့်အထိ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး သတိပေးခဲ့ခြင်းဖြစ် သည်ဟု ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ခဲ့ သူအချို့ထံမှ သတင်းရရှိသည်။
ပုဒ်မ ၄၃၆ ပြင်ဆင်ရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး အမျိုးသားဒီမိုကရေ စီအဖွဲ့ချုပ်နှင့် ၈၈ ပွင့်လင်းလူ့ အဖွဲ့အစည်းတို့ပူးပေါင်းကာ ယခု နှစ်မေလ ၂၇ ရက်မှ ဇူလိုင် ၁၉ ရက်အထိ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး တွင် လက်မှတ်ထိုးအခမ်းအနား များပြုလုပ်နေကြခြင်းဖြစ်သည်။
ချင်းပြည်နယ်၊ တီးတိန်မြို့နယ် တွီဗျာလ်ကျေးရွာတွင် မှိုစားပြီး သားအဖလေးဦးစလုံး သေဆုံး
သွားကာ သမီးဖြစ်သူမှာမူ ဆေးကုသမှု ဆက်လက်ခံယူနေရကြောင်း ဒေသခံများထံမှ